U fiirso dhibaatada Othipron iyadoo la eegayo dooda (column 457) - Rabbi Michael Avraham
Fiiri Dhibaatada Othipron ee Iftiinka Doodda (Column 457)
80 faallooyin	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
Tiirka hore waxaan ku soo bandhigay doodda aniga iyo David Enog na dhexmartay (eeg Halkan Duubista) su'aasha ah in Ilaah looga baahan yahay aasaas u ah ansaxnimada akhlaaqda (ama: Ilaah la'aantiis wax walba waa la ogol yahay). Intii ay socotay doodda, dhexdhexaadiyaha (Jeremy Fogel) ayaa soo qaaday murugada Othipron, oo wejigeeda u muuqday mid aan xiriir la lahayn dooda. Muddo ka dib ayaa dibi la i xasuusiyay 278 Horay ayaan uga hadlay dhibka jira iyo sida ay u daliishan karto akhlaaqda ( suldaanka akhlaaqda Eebbe). Doodda sare waxaan si kooban uga jawaabay su’aasha, halkan waxaan ku soo noqon doonaa si aan u caddeeyo xidhiidhka ay la leedahay doodii Enoog iyo in aan soo saaro farqigii aan halkaas ku soo qaatay iyo tiirarkii hore.
Waxaa muhiim ah in aan horudhac u yeelo in fikradda Ilaah ee aan wax kaga qabanayo tiirkan aysan la mid ahayn Ilaaha “liitada” ee aan kaga hadlay tiiradda hore. Qaar ka mid ah talooyinka aan halkan ku soo jeedinayo ayaa ah mid dheeraad ah oo aan ka mid ahayn "liitada" ee Eebbe looga baahan yahay inuu dhaqangeliyo xeerarka akhlaaqda. Waxaan ku soo laaban doonaa bartan dhamaadka tiirka.
In wada hadalka Plato A. Eitifron Su'aasha soo socota ayaa la soo bandhigay: Wanaaggu ma wanaagsan yahay ilaahyada ayaa raba, mise ilaahyadu waxay rabaan wanaag sababtoo ah waa wanaag. Si kale haddii loo dhigo, su'aashu waxay tahay ma waxaa jira macne ujeedo ah oo wanaag ah, mise waxa wanaagsan ayaa ah go'aanka ilaahyada, laakiin si la mid ah waxay go'aansan karaan in dabeecad kasta oo kale ay tahay mid wanaagsan ama xun. Wax walba waxay u heellan yihiin rabitaankooda gardarada ah. Su'aal la mid ah dabcan sidoo kale waa la soo saari karaa iyada oo la xiriirta Gd, iyo Avi Sagi iyo Daniel Statman, buuggooda Diinta iyo akhlaaqda, Qabo dood aad u faahfaahsan oo ku saabsan arrinta. Gabagabadii ay halkaa ka soo saareen ayaa ah in ku dhawaad ​​dhammaan mufakiriinta Yuhuuddu ay u ololeeyaan doorashada dambe. U daadegi maayo dhammaan nuxurka iyo doodaha ka dhashay buuggan sare ku xusan guud ahaan (waxa aan filayaa in ay khaladaad ku jiraan), waxaanan ku soo koobayaa dulmar kooban oo ku saabsan sababaha asaasiga ah ee labada dhinac.
Dhinaca kale, fiqi ahaan waxaynu u qaadanaynaa in Ilaahay yahay wax walba oo wax walba awoodo oo aanu waxba ka hoosayn. ma jiro isaga mooyee. Adduunka isagaa abuuray oo dejiyey shuruucdii ku dhex jirtay. Macnuhu waxa weeye in uu si kale oo uu u malayn karay u go’aamin karay. Markaa ma jirto macne ujeedo leh oo wanaag iyo xumaanba leh. Dhanka kale, haddii la qaato aragtidaas, gabagabada ayaa ah in aan la odhan karin Ilaah baa wanaagsan. Odhaahda ah in Eebbe wanaagsan yahay wuxuu u qaadanayaa inuu jiro wanaag lagu qeexo asaga oo aan la eegin, doodduna waxay tahay in hab-dhaqankiisa iyo shuruudihiisa ay ku habboon yihiin iyo isla jaantuska ujeeddada ee wanaagga. Haddiise ay tahay go’aankiisa kan qeexaya fikradda wanaagga, markaas hadalka ah in Eebbe wanaagsan yahay wax kale ma aha ee waa qeexid tautological (ama analytical theorem) ee maaha dood. Asal ahaan waxa ay ka dhigan tahay: Ilaah waxa uu doonayo. Laakiin tani waa run dhammaanteen.
Fiqiyaal badan (iyo xitaa danayste yar ayaa ku biiraya) waxay u muuqdaan inay u maleynayaan in tani ay tahay boos dhib leh. Ilaah runtii waa wanaagsan yahay oo ma uu noqon karin si kale. Tani waxay dabcan u qaadanaysaa in wanaagga si dhab ah loo qeexo, Ilaahna isaga qudhiisa ayaa qeexaya. Dabcan wuu ina jahawareerin karay oo indhaheenna ka indho-tiray si aynaan u kala saarin xumaanta iyo samaanta, laakiin si kale uma kala saari karo xumaanta iyo samaanta. Sida aan soo sheegay, inkastoo dhibaatooyinka fiqiga ah, waxay u muuqataa in inta badan mufakiriinta fikirka Yuhuudda ay hayaan habka labaad.
Fahamka iyo baridda
Fikirka ugu horreeya waa la sifayn karaa wax yar, waxaana loo qaabeeyey sidan soo socota: Waxaan leenahay dareen ku saabsan wanaagga iyo xumaanta. Dooddu waxay tahay in doonista Eebbe ay waafajiso isla caqli-galnimadaas. Laakiin dareenkan isaga ayaa inagu dhex beeray, sidaa darteed ma jirto fikrad ujeedo leh oo wanaag iyo xumaan ah. Sidaas awgeed waxa la odhan karaa hadalkani waa sheegasho (oo aan ahayn qeexid), laakiin isla mar ahaantaana waa sheegasho ka hadlaysa fikradaheena ee maaha adduunka laftiisa. Sida adduunka lafteeda, odhaahda "Ilaah waa wanaagsan yahay" macnaheedu maaha (waa aqoonsi madhan, tautology).
Tani waa xaalad gaar ah oo ku saabsan dhibaatada xiriirka ka dhexeeya macnaha iyo waxbaridda. Qaadashada tusaale ay faylasuufyada gorfaynta ahi inta badan isticmaalaan (eeg tusaale. Halkan), Sheegashada: Xiddiga waaberiga waa xiddigga fiidkii. Tani waa waxa in muddo ah loo tixgeliyey inay yihiin laba xiddigood oo kala duwan (Mid waxa la arkaa fiidkii, ka kalena subaxda), laakiin ugu dambeyntii waxaan ogaanay inay isku mid yihiin. Hadda waxa nala waydiiyay: Sheegashadani ma sheegasho madhan ama qeexid (aragti falanqayneed)? Ma wax ka kooban yahay mise waa tautology madhan? Sida macquulka ah jumlada noocaan ah waxba ma dhahdo, maadaama ay tahay haybta shay iyo laftiisa ka dhexeeya. Laakiin dareenkeena ayaa ah in uu jiro wax ugub ah jumladan. Waxay ina baraysaa wax ku saabsan fikradaheenna. Labada xiddigood ee aan is lahayn way kala duwan yihiin waa isku xiddig lafteeda. Weedhani waxay beddeshaa aqoontayada adduunka, inkasta oo marka la eego nuxurka ujeeddada ay u muuqato aqoonsi madhan.
Ogow in tani ay tahay kiis kasta oo sheegasho aqoonsi oo ah nooca: a waa b. Iyadoo loo malaynayo in sheegashadani ay sax tahay, markaas waxay dhab ahaantii ka dhigan tahay: a waa a, ie. tautology madhan. Xalka gorfaynta mushkiladda macnaha sheegashada aqoonsiga waa kala soocidda macnaha iyo baridda. Faylasuufyada falanqeeya (oo raacaya Frege) waxay yiraahdaan marka loo eego aqoonsiga noocaas ah waxaa jira macno laakiin ma aha tilmaam (ama midab). Waxay leedahay macno aan faaruq iyo faa’iido toona inagu lahayn, laakiin haddaad u fiirsato waxa ay adduunyada ku tilmaanto waa hayb-sheegid yar.
Hadda waxaan ku laaban karnaa laba-la'aanta Othipron. Marka la eego sida uu Eebbe u kala saarayo xumaanta iyo samaanta, waxa lagu doodi karaa in hadalka ah in uu wanaag yahay macne uu leeyahay balse aanu ahayn waano. Marka la eego waxbariddiisa (midabka) way madhan tahay mar haddii ay ku wanaagsan tahay qeexidda wanaagga. Wax kasta oo uu samayn lahaa waxay uga tagi lahaayeen isaga oo hoos imanaya qeexida wanaagga, markaa Amira oo wanaagsani way madhan tahay nuxurka (analytical).
Laakiin way igu adag tahay inaan aqbalo xataa ereyadan fudud. Dareenka fudud ayaa ah in Ilaah run ahaantii loo malaynayo inuu wanaagsan yahay, taasoo la macno ah in sheegashada inuu wanaagsan yahay uusan ahayn qeexid madhan ee waa sheegasho. Haddii aanay taasi jirin, ma jirto wax faa’iido ah oo lagu mashquulo wanaagga Eebbe, su’aalna kama taagteen dhaqamada anshax-xumada innoogu eg (sida xidhidhkii Isxaaq, burburkii Camaaleq, iyo sida). Waa in la fahmo in haddii waxa Eebbe doonayo lagu qeexo inay yihiin wanaag markaa ma bannaana in shaki akhlaaqeed laga shakiyo. Waxa uu amray in la raaco Isxaaq sidaas darteedna ku xidhidhiyaha Isxaaq waa wax wanaagsan. Dareenka sida in uu jiro khilaaf u dhexeeya amarka Ilaah iyo akhlaaqda ayaa tilmaamaya meesha aan ka bilownay in Ilaah yahay mid wanaagsan. Sida ay jiritaan doodda akhlaaqdu u muujinayso ujeeddada anshaxa (haddii kale ma jirin wax laga doodi karo) iyo jiritaanka naqdigu waxa uu tilmaamayaa xaqiiqada xaqiiqooyinka anshaxa (haddii kale ma bannaana in la dhaleeceeyo hab-dhaqannada anshaxa ka baxsan). dabeecadaha).
Gabagabadii ayaa ah in dareenka diineed ee fudud uu ina barayo sida dhinaca kale ee dhibaatada Othipron, in wanaaggu si macquul ah iyo si qasab ah u qeexay xitaa Ilaah. Yacni Illahay wax buu rabaa sababtoo ah way wanaagsan yihiin ee maaha si kale. Sidan oo keliya ayaa lagu doodi karaa inay wanaagsan tahay, sidoo kalena lagu dhaleeceeyo (ama sharraxaad la raadiyo) xaaladaha dhaqan-xumada. Laakiin sidaan aragnay habkani wuxuu kor u qaadayaa dhibka ka soo horjeeda, waxaanan hadda sii wadi doonaa inaan wax ka qabto.
Inta u dhaxaysa sharciyada fiisigiska iyo "sharciyada" macquulka ah
Habkani wuxuu kor u qaadaa dhibka fiqiga lidka ku ah. Sidee bay ku dhici kartaa in Ilaahii wax walba abuuray, wax walbana lagu sameeyay awooddiisa, uu haddana ku hoos jiro sharci dibadda ah oo uusan dejin? Si aan taas u fahanno, waa in aan ku soo laabanaa faraqa aan halkan ku sameeyay waagii hore ee u dhexeeyay laba nooc oo sharci ah (eeg tusaale tiirka. 278). Eebbana, dabcan, kuma hoos jiro shuruucda Fiisigiska, waayo isagaa abuuray, afkii diidayna waa afkii oggolaaday. Isagu sidoo kale kuma hoos iman sharciyada gobolka dabcan (haddii oo kaliya sababtoo ah isagu ma aha muwaadin ka mid ah). Laakiin dhanka kale waxaa hubaal ah in ay "ku xiran tahay" sharciyada macquulka ah. Shuruucda caqli-galku waa "lagu qasbay" Ilaah. Ma samayn karo saddex-xagal wareeg ah, mana ka leexan karo macquulka, sababtoo ah ma jiro wax la yiraahdo saddex-xagal wareeg ah iyo ma jiro xayawaan caynkaas ah oo ka leexda macquulka ah. Saddex xagal qeexid ahaan ma wareegsan. Tani maaha sabab sharci kasta oo lagu soo rogay saddexagalka daruuri darteed, laakiin dabeecadeeda. Marka la qeexo sida saddex xagal waxa ay raacaysaa in aanu wareegsanayn oo aanu noqon karin wareegsan. Sidaa darteed awood la'aanta in la sameeyo saddex xagal wareeg ah ma aha xannibaad dibadda ah oo lagu soo rogay Gd, sidaas darteed sidoo kale maaha mid xaddidan dhammaan awooddeeda, ama khasaare ku jira.
Makhluuqa wax walba awooda leh ayaa awood u leh inuu sameeyo wax kasta oo la qiyaasi karo xitaa male-awaalka. Laakiin saddex xagal wareegsan waa fikrad madhan. Waxaas ma jiraan, waana wax aan la malayn karin. Sidaa darteed, awood la'aanta Ilaahay in uu abuurro wax noocaas ah, ma aha wax khasaare ah oo awooddiisa ah. Bal qiyaas qof ku weydiinaya haddii Ilaah samayn karo saddex xagal wareegsan. Waxaan weydiin lahaa inuu marka hore ii sharaxo fikradan ka dibna laga yaabo inaan ka jawaabo. Dabcan ma awoodo inuu sharaxo (ma leeyahay xaglo fiiqan ama ma leh? Waa maxay wadarta xaglaha? Dhammaan qodobbada kor ku xusan ma ka fog yihiin meeshaas?), Haddaba su'aashu waa iska cadahay.
Sidaan halkaas ku sharraxay, waxa jaahwareerka salka ku haya ereyga “sharci” oo labadan qodob si kale loo adeegsaday. Shuruucda Fiisigiska waa sharciyo uu Eebbe ku dejiyey dabeecadda uunka. Sharcigani waa go'aankiisa ah inuu dunida u abuuro dabeecad gaar ah oo uu ka abuuray dhowr fursadood oo kala duwan. Waxa kale oo uu abuuri karay sharciyo kale oo dabeecadda. Taas bedelkeeda, sharciyada caqli-galku maaha sharciyo isku macno ah. Isticmaalka ereyga "sharci" ee macnaha guud waa la amaahday. Si fudud waa qeexidda waxyaalaha ee maaha wax dibadda ah oo iyaga lagu khasbo. Saddex-xagalku ma wareegsana sababtoo ah qof ayaa mamnuucaya ama sababtoo ah waa mamnuuc. Sadex xagal ma ahan mid wareegsan. Sidaa darteed sax maaha in halkan lagu sheego in Ilaah ka doortay hal nidaam oo macquul ah oo ka mid ah dhowr nidaam oo suurtagal ah. Ma jiro nidaam kale oo macquul ah. Hadda ka dib qaab la mid ah kan sharciyada macquulka ah waxaan u isticmaali doonaa ereyga "sharci" calaamadaha xigashada.
Heerka sharciyada anshaxa
Su'aasha hadda soo ifbaxa waxay tahay heerka ay marayso sharciyada anshaxa: Xeerarkani ma waxay ku jiraan macnaha sharciyada Fiisigiska, mise waa "sharci" macnaha "sharciga" macquulka ah? Kuwa u doodaya dhinaca hore ee dhibaatada Othipron waxay aaminsan yihiin in sharciyada akhlaaqdu ay la mid yihiin sharciyada fiisigiska, sidaas darteedna waa Ilaah kan go'aamiya oo qeexaya. Dhinaca kale ee laba daran mid dooro, dhinaca kale, waxay u qaadanaysaa in "sharciyada" akhlaaqdu ay la mid yihiin "sharciyada" macquulka ah (kuwaasi waa "sharci" ee maaha shuruuc), sidaas darteedna lagu qasbay Ilaah. Ma uu abuuri karin nidaam ka duwan shuruucda akhlaaqda. Tusaale ahaan, ma abuuri karo adduun uu akhlaaq kale ka hirgalo (in dadka la dilo ama la jirdilo ay yeelanayaan ficillo wanaagsan). Akhlaaqda qeexitaankeedu waa mamnuuc dil.
Waxa uu dabcan abuuri karaa adduun ay dadku ku raaxaysan doonaan jirdilka (miyay ku habboon tahay adduunkan oo kale in loogu yeero " jirdil"?), Ka dibna waxaa laga yaabaa inaysan jirin dhibaato akhlaaqeed oo keenaysa dhibaatada. Laakin meesha dhibka keenaya nasiib darro maaha. Rinjiyeynta dadka waa shay xun adduun kasta oo suurtagal ah. Waxay ku saabsan tahay adduun waaqici ah oo kala duwan, i.e. adduun aan silica keenin murugo. Waxa kale oo la is odhan karaa waa duni dadka lagu jeesjeestaa lagu sifeeyo wanaag, laakiin maaha duni akhlaaqdu ka duwan tahay ee waa duni ay dadku ka indho la’ yihiin axkaamta akhlaaqda (sidoo kale Ilaahii abuuray ma aha akhlaaqda wanaagsan). ). Waxaad bedeli kartaa halbeeg kasta oo dabeecadda adduunka ah oo waxaad abuuri kartaa adduun ka duwan halkaas oo ay ka duwanaan doonto. Laakiin marka la eego dabeecadda adduunkaas gaarka ah, xeerarka akhlaaqda waxay ka soo jeedaan si aan leexleexad lahayn (waa nalagu qasbay). Waxay iila muuqataa in tani ay tahay tan salka ku haysa odhaahdii caanka ahayd ee Ramchal ee ahayd "Dabeecada wanaagsan in wax wanaagsan la sameeyo." Gd dabeecad ahaan waa inay wanaag sameeyaan. Ma haysto wax kale (waa lagu qasbay).
Tani waxay ka dhigan tahay in sheegashada "dilku xun yahay" uu yahay mid lafagurayo, sida sharciga is burinaya. In kasta oo ay tani tahay xaqiiqo anshaxeed, ma aha mid ku xidhan (laakin lagama maarmaan ah). Sidaa darteed ma jirto wax caqabad ah oo lagu andacoonayo in lagu qasbay (ama halkii: "lagu qasbay") Ilaah, sida caqli-galku uu "ku qasbo" isaga. Tani way ka duwan tahay sharciyada dabiiciga ah tusaale ahaan. Tusaale ahaan u soo qaado sheegashada sharciga cuf-isjiidadka: laba walxood oo cuf leh ayaa midba midka kale ku soo jiitaa awood u dhiganta wax soo saarka cuf-jiidka oo u dhigma labajibbaaran masaafada u dhexeysa. Tani maaha sheegasho gorfayn, waxayna noqon kartaa been. Waxaa jiri kara adduun uu sharciga cuf-isjiidadka ka duwanaan lahaa (tusaale xoog u dhigma masaafada saddexaad). Sidaa darteed sharcigan ayaa ah mid Eebbe u gaar ah, oo go’aankiisa oo keliya ayaa go’aamiyey waxa ku jira.
Sida ay ugu habboon tahay tiirka hore
Tiirka hore waxaan ku dooday in akhlaaq sax ah uusan jiri karin Ilaah la’aanteed. Tani miyaanay ka hor imanayn sheegashadayda halkan ee ah in akhlaaqda lagu khasbo Ilaahay iyo isaga hortiis, sidaas darteedna aanay ahayn mid ku yimid rabitaankiisa? Sida muuqata halkan waxaa ka jira iska hor imaad xagga hore ah. Hadda waxaan fahamsanahay in tani ay u badan tahay waxa Jeremy Fogel, fududeeyaha, uga jeeday, kaas oo ku kiciyay Othipron dilemma dooddeenna oo i weydiiyay ra'yigayga ku saabsan.
Doodda lafteeda waxaan si kooban u sharraxay in aan kala saaro qeexidda xumaanta iyo samaanta iyo sida aan uga go'annahay iyaga. Qeexida xumaanta iyo samaanta waxay ku qasban tahay Ilaahay oo si kale ma noqon karto. Xitaa isagu ma go'aamin karo in dilku wanaagsan yahay, ama in la caawiyo dadka kale ay xun tahay. Laakin go'aanka ah in wanaagga la sameeyo oo laga fogaado xumaanta ma jirto Ilaah la'aanteed. Si kale haddii loo dhigo, sheegashada caadiga ah ee ah in dilku xaaraan yahay, taasoo la macno ah inay jirto ansax ku xidhan xaqiiqada anshaxa ee mamnuucidda dilka, kuma aha mid Ilaahay ku qasbayo. Waxay ka timid amarkiisa oo ay ku shaqeyso isaga.
U soo noqoshada fikradda ah 'xaqiiqda anshaxa', waxaan u dhigi karnaa sidan: waxaa laga yaabaa inay iskood u jiraan, sida David Enok ku andacoonayo (yacni Ilaah ma uumin), laakiin sida aan uga dooday isaga xitaa haddii ay jiraan oo la dhigo. gees ka mid ah adduunka fikradaha (waa), Weli iguma xidhi karto (waa waajib). Waxaan ku xusi doonaa tixda hore ee aan ku kala saaray su’aasha ah cidda abuurtay xaqiiqooyinka anshaxa (Enoog ka hadlay) iyo su’aasha ah yaa siinaya ansaxnimada (oo aan ka hadlay). Waxa aan halkan ku tilmaamay waa in inkasta oo uusan Eebbe abuurin xaqiiqooyinka akhlaaqda ah (iyaga ayaa lagu qasbay), amarkiisa oo keliya ayaa awood u leh inuu awoodo.
Waxaa laga yaabaa in hadda la is weydiiyo maxaa Ilaahay laftiisa ku waajibiyay akhlaaqda? Haddii uu wanaagsan yahay isna waa inuu u hoggaansamaa akhlaaqda (sida uu u kala horreeyaan). Ma isagaa amarkiisuu xidhan yahay? Tani waa mid aad u la yaab leh, oo dhab ahaantii sidoo kale waxay ka soo horjeedaa sheegashadayda tiirarka hore ee ah in loo baahan yahay arrin dibadda ah oo siin doonta de Dicto ansaxnimada sharciga.
Waxay ila tahay inay saxan tahay in la yiraahdo Ilaah dhab ahaantii kuma heellan akhlaaqda, laakiin doorta. Isagu ma doorto waxa ay tahay akhlaaqda (waayo waa tirakoob buuxa oo adag oo aan gacantiisa ku jirin) laakiin wuxuu doortaa inuu ka farxiyo oo ka dalbado makhluuqaadkiisa anshaxa suubban. Tani waxay la mid tahay sida aan ku sheegay tiiraddii hore ee ku wajahan Ari Alon, oo ah in qofku naftiisa u sharciyeeyo in uu akhlaaq leeyahay iyo in kale, laakiin isagu ma dejin karo shuruucda anshaxa laftiisa ( kala qeex waxa wanaagsan iyo waxa xun). Hadday sidaas tahay, dadka iyo Ilaahayba waxay ku xidhan yihiin shuruucda anshaxa. Qeexida xumaanta iyo samaanta iyagaa lagu qasbay oo aan la siin. Laakiin Ilaahay wuu amri karaa akhlaaqda, sidaas darteedna wuxuu ina siin karaa qeexitaannadan xoog nagu adkaynaya, innaguna taas ma samayn karo.
Hadda waxaan ku dari doonaa heer kale sawirka. Way adag tahay in laga hadlo ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah ee xaqiiqooyinka anshaxa (qeexidda wanaagga iyo xumaanta) Ilaah, maadaama uu weligiis jiray. Isaga ka hor waxba ma jirin waayo wakhti isaga ka horreeya ma jiro. Ma jiro adduunna ma jiri karo, xitaa mid male-awaal ah, oo uusan Eebbe ka jirin. Laakiin aragti ahaan waxaa laga yaabaa inay jirto adduun uusan Eebbe farayn inuu akhlaaq lahaado (haddii aan u qaadanno in dabeecaddiisa wanaagsani ku khasbayso inuu wanaag sameeyo oo uu dalbado faa'iido). Bal u fiirso inaynu hadda baranay in akhlaaqdu ay ka horreyso amarka Ilaahay, balse aanu Eebbe ka horrayn. Waxay ku saabsan tahay horumarka ku meel gaadhka ah. Laakiin ilaa xad la mid ah waxaa sidoo kale jira horumar la taaban karo.
Xaqiiqooyinka anshaxu kuma tiirsana amarka ilaahnimada, mana aha shaqada Ilaah. Laakiin weli ma jirto wax macno ah sheegashada ah in akhlaaqdu ay jirto xitaa Ilaah la'aanteed. Anaga oo u malaynaya in Eebbe yahay kan jiritaankiisu lama huraan yahay (oo halkan waxaan ka hadlayaa Ilaaha diiniga ah, ee ma aha kan "liitada" ee tiirka hore), markaa lama sheegi karo xaqiiqo jirta oo loo baahan yahay. taasi ma jirto. Sidaa darteed xitaa haddii akhlaaqda (ama xaqiiqooyinka akhlaaqda) ay jiraan amar la'aan lama odhan karo way jirtaa Ilaah la'aanteed. In kasta oo xitaa haddii ay labadooduba is barbar jiraan, haddana xaqiiqooyinka anshaxu weli lama tiirsadaan Ilaah.
Laakiin hadda waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan gaarno qeexitaan yar oo kala duwan: xaqiiqooyinka akhlaaqda waa laf naftii Ilaah (macnaha "dabeecad wanaagsan in wanaag loo sameeyo" macno ahaan), waxay u jiraan sida uu u jiro, iyo sida uu daruuri u jiro iyo had iyo jeer. waa lagama maarmaan inay jiraan iyo had iyo jeer. Haddana ansaxnimadooda maaha mid joogto ah mana aha lagama maarmaan. Ma laha awood xidhidh aan la amrin.
Inta u dhaxaysa u adeegidda Ilaah iyo Aasheer ma shaqayn
Furitaanka tiirka waxaan ku adkaystay in fikradda Ilaah ee looga hadlay tiirkan aanu ahayn kan "liitada" ee tiirka hore (Ilaah looga baahan yahay inuu bixiyo ansaxnimada sharciyada anshaxa iyo xaqiiqooyinka anshaxa). Taas waxaad ogaan doontaa markaad dib u eegto talooyinka kala duwan ee halkan ka soo baxay ee ku saabsan in ay jirto baahi mar walba jirta, iyo xaqiiqda ah in xaqiiqooyinka anshaxa laga yaabo inay ka mid yihiin awoodaheeda iyo inay dabiici tahay in wanaag la sameeyo. iyo qaar kaloo badan. Dhammaan kuwan waa wax lagu daro oo "ka dhigaya" in yar oo "dufan" ah "dhuuban" iyo wax yar oo aan uga hadlay tiirarka hore.
Tani waa sababta oo ah dooda ku jirta tiirkan hadda waxay ku dhacdaa gebi ahaanba dhinaca fiqiga, ee ma aha oo kaliya kan meta-anshaxa. Dhab ahaantii, dhibka Othipron laftiisa ayaa iska leh dhinaca fiqiga. Fiqi la'aanteed dhib ma ay ahaan lahaydeen in lagu andacoodo in Ilaahey qeexayo xeerarka akhlaaqda (maxaa yeelay looma baahneyn in loo qaato in hadalka ah in uu wanaagsan yahay ay tahay dood isaga ku saabsan ee ma aha qeexid), markaa laba daran mid dooro ma dhicin. la abuuray. Intaa waxaa dheer, in tirinta falsafada sidoo kale ma jirin wax khilaafsan waxa aan ku sheegay tiirkii hore. Haddii Eebbe u qeexo wanaagga iyo xumaanta (xaqiiqda anshaxa) markaas waxay ku habboon tahay wixii aan ku dooday tiirkii hore, loomana baahna tiirkan oo dhan. Ujeedadaydu halkan waxay ahayd inaan iswaafajiyo sheegashadayda-anshaxeed ee tiirarka hore iyo Ilaaha fiqiga (Yuhuudda-Masiixiyiinta) diyaaradda kaas oo malo ah inuu isagu wanaagsan yahay. Kani waa dood fiqi oo cad (ma aha mid anshax-meed ah).
Dhibaatada Othipron ee ku saabsan qiyamka diinta
Dhowr jeer oo hore waxaan tilmaamay farqiga u dhexeeya qiyamka diinta iyo qiyamka akhlaaqda (eeg tusaale ahaan tiir). 15Bilawga buugayga Wuxuu dhex maraa inta taagan Iyo qaar kaloo badan). Xalka aan u soo jeedinayo is-diiddanka u dhexeeya halakadda iyo akhlaaqda waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in ay yihiin laba nidaam oo kala madaxbannaan. Xeerka X waxa uu noqon karaa mid xalaal ah (maxaa yeelay waxa uu kor u qaadaa qiimaha diinta A), laakiin isla mar ahaantaana waa mamnuuc akhlaaq ahaan (maxaa yeelay waxa ay meel kaga dhacaysaa qiimaha akhlaaqda B). qiyamka diineed waa akhlaaq darro, mararka qaarkoodna waxay u istaagi karaan si ka duwan qiyamka akhlaaqda iyo mararka qaarkood kaliya xaalad isku dhac ah (marka khilaafku soo baxo oo keliya xaaladaha qaarkood). Murankaygu waa in aanay jirin wax caqabad ah oo ka hor imanaya is-diiddannadan oo kale, run ahaantiina ay aad u saxan tahay in la yidhaahdo kuwaas ma aha kuwo is burinaya (ma jiraan wax dhib ah oo dhinaca aragtida ah marka la eego xaaladahan oo kale), laakiin khilaaf ( way adag tahay in la go'aamiyo waxa la rabo in la go'aamiyo. ku samee heerka la taaban karo).
Taas ka dib, Tirgitz waxa uu waydiiyay su'aasha soo socota (bDib u hadal Ku socota tiirarka hore:
Tani waxay ka dhigan tahay in tiirka soo socda aad sidoo kale la tacaali doonto euphron ee ku saabsan qiyamka diinta iyo qiyamka kale, taas oo aragtidaada ay yihiin qiyamka taas oo Gd uu naftiisa u oggol yahay inuu iska tuuro waajibaad kasta oo akhlaaq ah. Taasna macneheedu waxa ay macneheedu tahay in xataa Ilaahay aanu si is-daba-marin ah isu dejin.
Su'aashiisa ayaan sharxi doonaa. Sida habkayga uu qabo, Ilaahay waxa uu ina farayaa in aynu yeelano awaamiir ka dhan ah akhlaaqda si loo horumariyo qiyamka diinta. Haddii ay sidaas tahay, Tirgitz ayaa ku doodaya, waxay u muuqataa in qiyamka diineed sidoo kale lagu qasbay isaga oo aan ahayn natiijada rabitaankiisa madaxbannaan (sharcigiisa madaxbannaan). Haddii awaamiirtu aanay ahayn "xaqiiqo halaq ah" oo Ilaah lagu soo rogay balse uu abuuray sharcigiisa, markaas si ka duwan buu u dejin karay iyaga. Xaaladan oo kale waxaan filayaa hadii uu rabo (oo laga dhaxlo) in uu wanaag sameeyo in aanu soo saarin shuruuc ka hor imanaysa akhlaaqda. Jiritaanka khilaafaadku waxa uu tilmaamayaa in shuruucda halakaha (ama qiyamka diineed, ee isla xeerarkii halakhu ay kor u qaadaan) lagu khasbo Gd, sidaas darteed isaga ayaa la qabtaa (ama na xoog sheegaa) iyada oo ay lama huraan tahay isku dhacyadaas.
Tani waa su'aal weyn, waxaana filayaa inuu saxan yahay. Sida ay jiraan xaqiiqooyin anshaxeed ayaa sidoo kale jira xaqiiqooyin xalaal ah. Kuwaas iyo kuwa Alle kuma xidhna oo waa lagu qasbay. Bilowgii buugga saddexaad ee trilogy waxaan ku dhawaaday inaan isbarbardhigo sawirka Kantian ee dabeecadda akhlaaqda sida ixtiraamka nidaamka kala-soocida leh ee sawirka halakhiga ah ee aan bixiyo ee samaynta mitzvah sida ixtiraamka ballanqaadka amarka. Halkan waxaan ku aragnaa in isbarbardhiggani uu sii socdo.
Tani waxay ii keentaa su'aal kale oo uu qabo Tirgitz, taas oo la waydiiyay dhawr maalmood ka hor (eeg doodaha dunta Halkan). Marka la eego macnaha guud waa wax caadi ah in lagu fekero in xaaladaha khilaafka u dhexeeya qiyamka, markaa xitaa haddii aan haysto cudurdaar ah inaan sameeyo X oo aan dhaafo Y, weli waxaa jirta dhibaato aan ka gudbay Y. Waa inaan dareemo murugo ama murugo. in aan qof xumeeyo ama sameeyo wax anshax xumo ah, xataa haddii aan sidan sameeyo. Tirgitz wuxuu waydiiyay bal in murugada noocan oo kale ah ay sidoo kale ka soo muuqato macnaha halakhii (Q.)lagu hadlo: "Adiga ayaan kuu murugoonayaa anigana ii murugoon". Taasi waa, haddii aan ka qoomameeyo in sababtoo ah waxaan ku hawlanaa mitzvah ma aanan ruxin lulav (ama sababtoo ah waan xanuunsanahay maan soomin Yom Kippur), sidaan ka qoomameynayo sababtoo ah waxaan galay dagaal waa inaan dilo. dadka (iyo mararka qaarkood rayid sidoo kale). Isku soo wada duuboo, su’aashiisu waxay tahay ma farqi u dhexeeya xalaqada iyo akhlaaqda arrinkan.
Waxaan uga jawaabay halkaas oo aan u maleynayo in uu jiro farqi u dhexeeya mawduucyada: macnaha guud ee anshaxa xitaa haddii qiimaha qaar lagu diido qiimaha kale, weli waa inaan dareemo murugo ama niyad-jabka inaan ka gudbo qiimaha la diiday (qof waan dhaawacay) . Dhanka kale, Xalaal haddaanay jirin wax waajib ah oo aan sameeyay wixii la igu waajibiyay ma jirto sabab aan uga qoomameeyo wixii aan gudan waayay. Si buuxda ayaa loo ogolyahay oo cidna waxba kuma yeelin.
Laakin kala soocidaani waxay u qaadaneysaa in halakhah uu jiro oo kaliya amar iyo marka uusan jirin wax amar ah waxba ma dhicin. Laakiin marka la eego sawirka halkan ka soo baxaya waxay u muuqataa inaan u baahanahay inaan nafteyda dib ugu soo laabto farqigan. Haddaynu u qaadanno in amarka xalaasha ahi uu u yimid inuu kor u qaado qiyamka diinta, markaas xitaa haddii aan si xaq ah ugu xad-gudbay xallaadka (xaalad kale oo diiday awgeed), haddana wax ka mid ah adduunyada ruuxiga ah ayaa waxyeello u geystay (waxaan ku kacay fal liddi ku ah xaqaa’iqa xalaal ah). wuxuu keenay dhaawac ruuxeed). Waxa ay u muuqataa in sawirka aan halkan ku soo bandhigay uu muujinayo in aanay run ahaantii wax farqi ah u dhexayn xalaqada iyo akhlaaqda.
Inkasta oo feker dheeraad ah lagu doodi karo in aragti ahaan haddii aan sameeyo wax la oggol yahay markaa dhaawaca ruuxiga ah ayaa sidoo kale laga fogaaday (eeg. Maqaallo On citric acid on Iidda Kormaridda, halkaas oo aan ka keenay ilo qoray si). Waxa la odhan karaa Gd waxa uu sameeyaa mucjiso oo waxa uu ka ilaaliyaa dhibta soo gaadhaysa si aanay u dhicin xumaan qof xaq ah oo aniga oo kale ah oo sharciga ku kalsoon. Tani dabcan kuma dhacdo diyaaradda akhlaaqda. Halkaa xitaa haddii aan ku dhaawaco qiimaha akhlaaqda, dhaawacu waa lama huraan. Farqigu wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in macnaha macnaha guud ay yihiin xaqiiqooyin jireed iyo macnaha dhabta ah kuwani waa xaqiiqooyin ruuxi ah. Ilaah ma beddelo fiisigiska sababtoo ah ma farageliyo hab-dhaqanka adduunka jireed, laakiin wuu beddelaa xaqiiqooyinka ruuxiga ah (maxaa yeelay adduunka ruuxiga ah wuu farageliyaa. Halkaas ma aha mid si farsamaysan loo maamulo). Waxaa muhiim ah in la ogaado in sida aan soo aragnay xaqiiqooyinka anshaxa aysan ahayn xaqiiqo jireed, waxay ku xiran yihiin xaqiiqooyinka jireed (waxyeelo ama dhibaato qofka tusaale ahaan). Tusaale ahaan, haddii aan qof ka xado lacag si aan nolol u badbaadiyo, xitaa haddii la oggol yahay iyo xitaa mitzvah, dhaawaca tuugga ayaa dhacay oo sabab aan ka qoomameeyo ma jirto (halkan ma dhici doonto mucjiso Ilaah. isagaa u celin doona lacagta).
Saameyntu waxay noqon doontaa kiisas sidaan ku qeexay tiirarka hore, halkaasoo nidaamka kala soocida uu ii sheegayo inaanan sameynin X inkastoo aysan lahayn natiijo xun. Xaaladahan oo kale waxay u muuqataa in haddii shayga loo diido qiimo kale ma jirto wax laga qoomameeyo. Tani waxay la mid tahay xaaladda ka jirta saaxadda halakhiska. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aan kor u qaado kun cashuur NIS si loo badbaadiyo nolosha qofka. Xaaladdan oo kale ma jirto wax aan ka qoomameeyo cashuur-dhaafka maadaama aysan lahayn natiijo xun (waxaan ku sharaxay tiirarka hore). Marka laga soo tago natiijada dhibka leh ee aan jirin, waxa halkan ku yaal waa kaliya xad gudubka nidaamka kala-soocida, laakiin tani dabcan waxay ahayd mid lagu caddeeyey xaaladahan. Dhab ahaantii, waxaa aad u saxsan in la yiraahdo anigu kuma xadgudbin nidaamka guud ee xaaladdan oo kale ah. Sharciga guud wuxuu dhigayaa in qof kastaa uu ka baxsado canshuurta si uu naftiisa u badbaadiyo.
 Tiirka hore waxaan ku sharaxay sababta sharciga is burinaya oo ah sheegasho macquul-falanqeyn ah uma baahna cudurdaar. Tani waa fikrad isku mid ah marka laga eego xagal yar oo kala duwan.
 Ka fakar su'aasha ah in Ilaahay uu abuuri karo gidaar u adkaysan kara xabbadaha oo dhan iyo weliba xabbad gidaarada oo dhan gala. Jawaabta tani dabcan waa taban, sababtoo ah haddii kubbadda uu abuuray ay soo gasho dhammaan gidaarada markaa ma jiro gidaar u adkaysta, sidaas darteed ma jiro derbi u adkaysta dhammaan kubbadaha, iyo liddi ku ah. Awood la'aanta Ilaahay inuu isku mar abuuro laba shay oo noocaas ah ma wiiqayso awooddiisa. Kaliya heerka macquulka ah ma jirto xaqiiqdaas. Eeg Halkan Saamaynta su'aasha dhagax in Ilaah ma qaadi karo, iyoHalkan Su'aasha sharka dabiiciga ah (sidoo kale eeg buugga labaad ee trilogy-ga cutubka tobnaad).
 Guntii iyo gunaanadkii waxa weeye wanaaggiisa ( foodhiyi ) wuu ka duwan yahay kuweena. Ma haysto sharciyo uu ku dhaqmo, laakiin isaga ayaa sharci u siinaya. Qofka waxaa lagu xirayaa nidaamka kala-soocida ah ee la siiyay ansaxnimadiisa, sidaas darteed waa in go'aan laga gaaro si loogu dhaqmo. Ilaah, dhanka kale, ma go'an, laakiin wuxuu doortay inuu siiyo ansax. Ramchal wuxuu dhihi doonaa dabeecadiisa waa inuu wanaag sameeyo.
 Bilawga tiirka 278 Waxaan ka hadlay fikradda nehma dhakisufa, oo ay ii muuqato in doodda halkaas ka socota ay sidoo kale ka jawaabto su'aashan.
 Fiiri maqaallo ku saabsan sida ay u kala horreeyaan ee halakaha, taas oo tusinaysa sii wadida isbarbardhigga u dhexeeya halakhah iyo akhlaaqda, laakiin markan waxa ay khusaysaa nuxurka ee maaha qaab-dhismeedka macquulka ah. Halkaa waxa aan ku doodayaa in nidaamka kala-soocida ahi uu leeyahay meeqaam xalaal ah.
 Waxaan halkan ku soo qaadan doonaa fikrad bilow ah oo weli u baahan in aan la soo koobi karin. Waxaan u maleynayaa inuu jiro farqi ka dib oo dhan. Marka la eego macnaha guud waxaa jira u heellanaanta qiyamka akhlaaqda, laakiin halakhah waxaa jira labadaba ka go'naanta qiyamka diinta iyo waajibaadka adeecida amarka iyadoo loo eegayo amar rabaani ah (iyadoon loo eegin xaqiiqda ah inay sidoo kale kor u qaadayso qiyamka diinta). ). Malaha halkan waa in xagga akhlaaqda ma jiro amar rabaani ah laakiin kaliya doonista rabaani ah in aan u dhaqmo habkan. Nidaamku ma laha heerka mitzvah ee qaabka halakhah (inkasta oo aan ku andacoonayo inay leedahay xaalad xalaal ah. Eeg maqaalladayda. Halkan).
Oo waxay raacdaa in markii aanan soomin Yom Kippur sababtoo ah waan bukay, cabbirka amarku runtii ma jiro, sababtoo ah amarka xaaladdan oo kale waa in la cuno oo aan la soomin. Markaa cunistan wax dhib ah oo ka dhacay ma jirto, wax laga qoomameeyona ma jirto. Dhanka kale, marka la eego macnaha guud, xitaa haddii qaar ka mid ah qiimaha si sax ah loo diido, waajibaadka akhlaaqda ah ee lagu ilaalinayo waa isku mid (marka laga reebo in aan la adeeci karin. Dhab ahaantii, waxaan ku doodayaa in khilaaf akhlaaqeed mar walba la diido). 'oo aan 'loo oggolayn'). Laakiin halakhah waxa kale oo jira cabbirka ka dhalan kara (sixitaanka laga abuuray mitzvah iyo kharribaadda dembiga), iyada oo arrintan la xidhiidhana waxa ay u muuqataa in ay la mid tahay waxa aynu ku aragnay macnaha guud. Waxay la xiriirtaa farqiga u dhexeeya jiritaanka de dicto iyo jiritaanka de re, iyo wixii la mid ah.
 Fiiri qoraalka bMaqaallo On Ciqaabta Halacha ee cutubka D, halkaas oo aan ka soo horjeeda habab farsamo ee ciqaabta jannada.
Jawaabta "Yaa abuuray Abuuraha".
80 Fikradaha ku saabsan "Fikirka Othipron Dilemma ee Iftiinka Doodda (Column 457)"
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 saacada 04:XNUMX
Umuliso ayaa ka qoomamaysay in laga hor istaagay inay soonto Yom Kippur. Marka la eego amarka si buuxda ayaa loo daboolay - waa laga dhaafay. Taa beddelkeeda, amarka lagu ilaalinayo nafta iyo nafta ayaa ka sii weyn. Laakiin way ka xun tahay, in kastoo ay si fiican u garanayso in amarkeeda hadda yahay in wax la cuno, waayo, ma ay soomin. Waxay ka maqan tahay maalinta soonka, daahirinta iyo kafaarada. Dareennadaas ma u diidi doontaa sida Afra Daraa, oo ma u diidi doontaa marmarsiiyo 'cilmu-nafsiga' - doodaha aadan tixgelin? Mise halkan ma jiraan wax kale oo si la mid ah u eg tiiraanyada seegay akhlaaqda?
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 saacada 01:XNUMX
Si buuxda ayaan u fahmay murugadan, waxaanan sidoo kale u maleynayaa inay hubaal tahay inay meel leedahay. Waxa aan ka hadlay waa su'aasha ah in ay jirto maslaxad/waajib (aan xalaal ahayn) in laga qoomameeyo. Marka la soo koobo, waxaan la tacaalayaa heerka caadiga ah ee aan ka ahayn heerka nafsiga. Haddii dadku laga adkaado ciyaar kubbadda cagta ah way ka xun yihiin, markaa miyaanad wadaadad ahaan doonin sidii hudheelle?!
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 saacada 18:XNUMX
Maan waydiin inaad fahanto murugada, ilaa aad ku aragto qiima u dhow ama la mid ah luminta qiyamka akhlaaqda. Yaan la seegin maqnaanshaha ciyaar kubbadda cagta.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 saacada 49:XNUMX
Ma aha ilaa xad la mid ah, haddii ay dhan tahay. Marka loo eego waxa aan ku qoray tiirka, iyada oo loo maleynayo in Gd uu ka hortagayo dhaawaca ruuxiga ah haddii qof u dhaqmo si sharci ah, markaa waxba ma dhicin. Oo haddii uu ka qoomameeyo khasaaradiisa (luminta waayo-aragnimada) - tani dabcan waa xaq uu leeyahay laakiin qasab maaha inay qiimo leedahay. Waxaa laga yaabaa inay muujiso nooc ka mid ah Yarosh tan iyo murugadu waxay muujinaysaa in arrimuhu ay muhiim u yihiin isaga. Laakiin murugada akhlaaqdu waa wax ka baxsan muujinta in qiimaha uu muhiim u yahay isaga. Sheegashada ah in wax dhib ahi runtii halkan ka dhaceen, marka laga reebo in aanan dambiile ahayn. Marka la eego macnaha dhabta ah ma jiraan wax dhibaato ahi. Ugu badnaan waxaad lumisay khibrad.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 saacada 13:XNUMX
Waxay ila tahay inay marag ma doonto ah in su’aalo akhlaaqeed Alle laga weydiinayo in akhlaaqda lagu qasbay.
Su'aalahani waxay kaliya u qaadanayaan in Ilaah u doortay amarka akhlaaqda inuu yahay mabda'a ugu sarreeya, sidaas darteed weydii sida uu isaga hor iman karo
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 saacada 18:XNUMX
Sharpener - su'aashu waa caddaynaysa ee maaha mid iska hor imanaya. Taas oo ah, waxaa u cad in ay jirto qiil damiir ah oo arrintan ku saabsan, mar haddii ay u maleyneyso in akhlaaqdu tahay mabda'a ugu sarreeya ee caloosha ay dooratay.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 saacada 03:XNUMX
Uma malaynayn inay isku dhaceen. Ka sokow, haddii ay wanaagsan tahay, markaa dhiirigelinta muhiim maaha. Laakiin waxaan filayaa in aad ka maqan tahay laxankii su'aalahan: waxaad u soo bandhigaysaa su'aalo macquul ah (oo ku saabsan isku xirnaantooda), laakiin su'aalahani waa kuwo anshaxeed. Waxaad mooddaa in Ibraahim kii amray in wiilkiisa la addeeco uu la yaaban yahay joogteynta Eebbe oo u ballan qaaday in Isxaaq uu ugu yeedhi doono farcan, oo uu iska indhatiro su'aasha ah sida Eebbe u amri karo waxaas oo kale. Adiga labadan su'aalood oo macquul ah ayay iskaga mid yihiin. Taasi maaha waxa abwaanadu u jeedaan.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 saacada 35:XNUMX
Sida su'aasha Tirgitz - tani run ahaantii waa su'aal wanaagsan, sababtoo ah dareenku waa in Halacha uu ka duwan yahay waajibaadka anshaxa (sida Maimonides u kala qaybiyo inta u dhaxaysa amarrada maskaxda iyo maqalka, iwm.). Hal dariiqo oo tan lagu macnayn karo ayaa ah in Gd uu ku hoos jiro rukhsad dhan oo ruuxi ah oo aynaan haleeli karin - ka dibna su'aasha sidoo kale si dabiici ah ayaa sidoo kale la is weydiin doonaa - haddii Gd uu hoos yimaado xeerar la soo koobay, ka dibna sida muuqata sharcigan. waa noole sare, nooc ka mid ah Spinoza Ilaah ma aha shakhsi iyo dan la'aan, laakiin "dabiici ah" adduun aan jireed ahayn. Waxay ila tahay in su'aasha ah in Ilaahay loo hoggaansamo sharciyada ay aad u liidato oo aan ka jirin arrimaha sharciyada macquulka ah, sida aad u sharaxday (in aysan ahayn "sharci"), oo ay ka yara xoog badan tahay arrimaha sharciyada akhlaaqda. , sababtoo ah waxaad ku doodday - in yar oo cidhiidhi ah laakiin sheegasho aan aqbali karo - inay lagama maarmaan u yihiin si la mid ah. Laakin marka laga hadlayo sharciyada xalaasha ah way adag tahay in la aqbalo, siday ila tahay. Sababtoo ah baahidooda waxay ku lug leedahay abuurista adduun ay lagama maarmaan u yihiin, oo u muuqda, iyo wejigeeda waxay u muuqataa mid aan loo baahnayn ( dooddu waxay tahay in ay lagama maarmaan u yihiin heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah, laakiin weli aan suurtagal ahayn in la fahmo iyaga - taas oo ah degdeg weyn. haddii aan adduunka la wada abuurin sharciyadan oo ay adag tahay in la cabudhiyo). Tani waxay sidoo kale run ka tahay sharciyada anshaxa ("" Sababta xanuunku waa mid xun "waa sheegasho kaliya oo la xiriirta aduunka xanuunka ka jiro - su'aasha ugu weyni waxay tahay sababta Ilaah uu u abuuray xanuunka aduunka ee ma aha sababta uu u sheegay. waa in aanay keenin xanuun), oo haddana bartey waxay u muuqataa in ay ka xoog badan tahay adduunka waxaan tagay halkaas oo sharciyadu u muuqdaan kuwo aan caadi ahayn. Si kastaba arrintu ha ahaatee, waxay Eebbe gelisay adduun isaga ka horreeyay oo uusan awood u lahayn. By habka, waxaa jira fursad kale oo aragti ah in ay wax ka qabtaan su'aashan, taas oo aanan garanayn waxa aan u malaynayo ku saabsan - in la yidhaahdo in Ilaah dooran karaa adduun halkaas oo kaliya sharciyada anshaxa la xiriira sida waajibaadka aadanaha, oo uu dooran karaa. aduunyo shuruucdaas laftooda laga diiday qiyamka kale, waxay noqon karaan wax kasta oo ay ku xiran yihiin doorkiisa. Oo isna wuxuu doortay ikhtiyaarka labaad sababtoo ah iyada oo aan xaalad noocan oo kale ah, waxaan si adag u eegi lahayn sharciyadan, waxay ahaayeen kuwo is cad (sida Maimonides uu wax ka qoro geedka aqoonta iyo doc). Marka loo eego suurtogalnimadan - jiritaanka adduun hallakh ah oo ka soo horjeeda shuruucda anshaxa ayaa mararka qaarkood lagu caddeeyaa sababo dibadda ah, ma aha lagama maarmaan, uma baahna adduun dhan oo sharci ah oo Ilaah u hoggaansamo. Dhanka kale, sidaan soo sheegnay, go'aanka abuuritaanka adduun noocaas ah wuxuu u ekaan karaa mid shaki leh.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 saacada 07:XNUMX
Ma fahmin sheegashada. Labo qodob oo kaliya ayaan ka faalloon doonaa hadalkaaga (oo aan filayo in aan fahmay):
1. Sharciyadu ma khuseeyaan. Qeexitaanka wanaagga iyo xumaantu ma aha mid halkaas ka jirta ee malaha waa xaqiiq. Sidaa darteed ma jiraan wax laga hadlo su'aasha ah inay Ilaah ka sarreeyaan iyo in kale.
2. Xataa sharciyada akhlaaqdu waa shuruuc adduunkeena ka jira oo kaliya. Haddii la abuuri lahaa duni kale oo gebi ahaanba ka duwanayd makhluuqaad si ka duwan loo dhisay (ma ay lahayn murugo iyo rafaad), markaa sharciyo kale ayaa lagu dabaqi lahaa. Laakin haddii ay ahaan lahaayeen shuruuc anshaxeed markaas kuwani waxay ahaayeen ku-dhaqanka shuruucdeena akhlaaqeed ee duruufahaas. Tani waa sidaad ku sifaysay xalaqada, markaa waxaad mooddaa in aanu wax farqi ahi jirin.
Wiilasheeda Yitzhak Koren
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 saacada 32:XNUMX
"Qof kasta oo sheegasho aqoonsi oo ah nooca: a waa b. Iyadoo loo malaynayo in sheegashadani ay sax tahay, markaas waxay dhab ahaantii ka dhigan tahay: a, oo macnaheedu yahay tautology madhan." - Waxaa igu adag inaan dhibka halkan ku helo. Iyadoo loo maleynayo in sheegashadani ay sax tahay, waxay si macquul ah u dhigantaa sheegashada A = A, laakiin sidoo kale sheegashada 1 + 1 = 2 iyo sheegasho kasta oo sax ah. Haddii micnaha weedha uu yahay xogta ay ku darto, markaa ma jiro jumlad leh "macnaha iyada oo loo maleynayo inay run tahay." Haddaynu u qaadanno / ogaano inay run tahay, in haddana la yidhaahdo waa run waxba naguma kordhinayso, sidaas awgeed muhiim maaha.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 saacada 44:XNUMX
Iyo si kale haddii loo dhigo: macno ayuu leeyahay oo waxba ma barayo.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/23 saacada 10:XNUMX
Dhibaatada quruxda badan ee Uthron waxay u socotaa sanamyada, kuwaas oo aan si buuxda u caddayn ilaa xadka lagu aqoonsaday akhlaaqda. Hase yeeshe, marka loo eego sheekooyinka khuraafaadka ah waxaa cad in ay ka buuxaan xaasidnimo iyo awood.
Taas ka duwan, Ilaaha reer binu Israa'iil waa isha runta iyo isha wanaagga. Ma 'hoos' akhlaaqda iyo runta. Isagu waa runta iyo akhlaaqda daahirnimadooda qumman. Anaga halabuure ahaan in aqoonteenu tahay jajab yar. Wax yar baynu ku naqaannaa dareenkayaga,dareenkeena iyo daraasadeena,laakin waxa aynu ognahay waa jajab yar oo sawir buuxa laga soo qaatay,kaas oo kaliya uu garanayo waxii aduunka abuuray isaga oo kaliya oo garan kara ujeedada laga leeyahay.
Dhibaatooyinkeena akhlaaqda ah ee ku saabsan hababka Abuuraha waxay la mid yihiin dhibaatooyinka ilmaha oo aan fahmin sababta aabbihiis gacantiisa u garaacay markii uu damcay inuu dubbe ku dhejiyo meel koronto ah, oo aan fahmin sababta aabbihiis loogu dhiibay quruurux cad cad oo arxan daran oo mindiyaha la soo baxay oo jeexjeexay hilibka wiilka nasiibka daran.
Dhinaca waalidka bini’aadamka ah, waxa aynu horeba fursad ugu yeelanay in aynu fahanno in jugta gacantu ay ku imanayso si ay uga badbaadiso in ubadku ku dhaco koronto, iyo ‘kuwa mindiyaha soo saara ee khamiisyada cad-cad’ ay ku sameeyaan qaliin naf-badbaadin ah ilmaha. Oo dhan si ka badan si sida falalka Abuuraha dunida, kuwaas oo qaatay aadanaha boqolaal sano oo cilmi baaris ah si ay u fahmaan in yar oo ay qoto dheer - in la ogol yahay in la siiyo qaar ka mid ah 'amaahda' in uu Abuurahayaga, in dhibaatada iyo caddibaad uu isagu. Oo weliba noo keenaa waa noo wanaagsan tahay inuu nagu diyaariyo jidka jidka, 'Lounge', oo aynu qalbiyadayada ku ogaanno in aabbuhu wiilkiisa silciyo, uu Elkich ku cadaabinayo.
Salaam, Othipron Nefshatim Halevi
'Akhlaaqda aabbahaa' iyo 'waxbarid hooyadaa' - qaadashada harqoodka ama fahamka iyo aqoonsiga?
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/02 saacada 05:XNUMX
Haddii uu abuuruhu leeyahay aqoonsi dhammaystiran oo u dhexeeya doonistiisa iyo ujeeddada wanaagga, bani-aadmiga waxa u dhexeeya farqi u dhexeeya dareenkiisa waxa wanaagsan iyo waxa saxda ah iyo tilmaamaha uu ka helo abuurkiisa. Farqigani ma aha oo kaliya 'suurtogal' laakiin lama huraan ah, laakiin waa la dhimay ilaa inta qofku sii qoto dheer yahay oo uu fahmayo rabitaanka Kono.
Dhanka wejiga, qofku wuxuu ku qanacsanaan karaa inuu aqbalo harqoodka iyadoo la hubo in Abuuraha adduunku uu ku dhaqmayo xukunka xitaa haddii aadanuhu fahmin, laakiin taasi kuma filna. Qofku ma aha oo kaliya inuu ahaado 'addoon' daacad u ah Kono, laakiin sidoo kale waa 'arday' yaqaana sida loo qeexo rabitaanka Kono xitaa xaaladaha uusan helin tilmaamo cad.
'Adoon' waa ku filan tahay in la yiraahdo ' saas yeel' ama ' saas yeel'. Tallaabo qaadi maayo, isagoon helin tilmaamo cad, laakiin si uu u noqdo 'arday' yaqaan sida loo jiheeyo doonista rabigiisa xitaa marka ay lagama maarmaan tahay in 'wax laga fahmo', waa in la fahmo. macnaha waxyaalaha, kaas oo uu ku dabaqi karo mabaadi'da.
Si taas loo gaaro, Tawreed qoran ayaa la bixiyay oo xagga sare laga soo sheegay ereyga 'looxyada ku xardhan', laakiin sidoo kale waa inuu ahaado 'Tawreed afka ah' kaasoo doonaya inuu fahmo macnaha iyo caqli-galnimada sharciyada Tawreed, iyo fahamka qoto-dheeraanta Sharciyada Tawreed - qofku wuxuu nuugi karaa ruuxa waxyaalaha .
By Tawreed afka ah oo caddaynaya sharciga xorriyadda - ninku wuxuu ka xoroobay 'dilemma of' Yifron ', tan iyo doonista Abuuraha oo bilaabay sida 'helitaanka harqood dibadda ah' - wuxuu noqdaa mid aad iyo aad u badan 'Tawreed Delia' kaas oo wuu fahmayaa wuuna aqoonsanayaa.
Salaan, Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
Xaq iyo baadil
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/03 saacada 12:XNUMX
Laakiin marka dembiga [nin geedka cilmiga ku jira] lagu ciqaabo in laga xayuubiyo isla garashada garashada… oo sidaas darteed waxaa la yiraahdaa 'oo waxaad ahaydeen sida Ilaah oo kale wanaagga iyo xumaanta' oo aanad odhanin 'wax yaqaana beenta iyo runta' ama 'ku guulaysta beenta iyo runta'.
Waxyaabaha lagama maarmaanka ah ma jiraan wax wanaagsan iyo xumaanba, laakiin beenta iyo runta "(Isniin, Qaybta I, P.B.)
Waxaa laga yaabaa in Maimonides halkan uu sidoo kale ka hadlayo xaqiiqooyinka anshaxa oo uu meesha ka saaro dhibaatada Eitipron?
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/10 saacada 30:XNUMX
Eeg tiirka 177 oo aan ku macneeyay in tani ay tahay asluub ​​ee maaha akhlaaqda.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/12 saacada 59:XNUMX
Waad ku mahadsan tahay tixraaca, waan akhriyay, waxaa laga yaabaa inaanan fahmin, laakiin dhib kamaan arag erayada Maimonides.
Waxay ila tahay in weedha laba loo qaybiyo.
"Oo waxaad la mid ahayd Ilaah wanaagga iyo xumaanta kala yaqaan" - tani waxay ku saabsan tahay wacyiga kugu soo kordhay ee loogu talagalay dadka caanka ah, kuwa qurxoon iyo kuwa fisqiga ah, samaan iyo xumaanba. Haddaba hadda akhlaaqdu adigay kula muuqataa wanaag iyo xumaanba.
"Oo [aayaddu] ma sheegin been iyo run ama kuwa helay been iyo run, iyo waxyaalaha lagama maarmaanka ah ma jiraan wanaag iyo xumaanba, laakiin been iyo runta" - halkan Maimonides macnaheedu waa akhlaaqda. Yacni, macnahaas oo aad Ilaahay ka fogaatay oo aad lumisay awooddii aqooneed ee aad hore u lahaydeen in aad akhlaaqda ku fahanto qayb run-Rabbaani ah oo run iyo baadil ah.
Waa in su’aal iyo jawaab ahaan loo akhriyaa – maxaase aayaddu u odhan weyday “been iyo run”? Jawaab - sababtoo ah waad lumisay. Laakiin waxaad ogaan doontaan in runtii, Ilaah agtiisa, waxyaalaha lagama maarmaanka ahi aanay wanaag iyo xumaan ahayn, laakiin ay been iyo run ahayn. Oo halkan dhibka Eitipron waa mid xad dhaaf ah.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/13 saacada 52:XNUMX
Ma xasuusto erey sax ah, laakiin waxaan gartay inay ku saabsan tahay asluubta oo kaliya ee aysan ahayn akhlaaqda. Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii aad ku saxan tahay in uu jiro qoraal ku yaal Maimonides oo aan meesha ka saarin dhibaatada Eitipron. Ugu badnaan waxaad ku doodi kartaa in Maimonides uu lahaa mawqif u gaar ah oo ku saabsan dhibaatada.
Akhlaaqda-naxariista mise akhlaaqda-ka-hortagga?
24 Adar 03 2022 - 00/50/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Gudaha SD ACH Tov gudaha Adash XNUMX
Farqiga u dhexeeya maaha 'diinta' iyo 'akhlaaqda' laakiin waxay u dhexeeyaan 'akhlaaqda naxariista' iyo 'akhlaaqda ka-hortagga'. Detersh, dhanka kale, waxa uu leeyahay anshaxa ka-hortagga si uu ugu keeno dembiilaha aargoosi naxariis darro ah oo ka saari doona dembiilaha mustaqbalka dhammaan 'oh aamiin' ee soo noqoshada dembiga.
Halkan waxaan u baahanahay 'amarka rabbaaniga ah' kaas oo siin doona qiyaasta saxda ah ee keeni doonta dheelitirka u dhexeeya baahida loo qabo ka-hortagga muhiimka ah iyo rabitaanka rabbaaniga ah ee naxariista iyo oggolaanshaha sixitaanka.
Haddaba, tusaale ahaan, ka-hortagga waxa ay u baahan tahay in xididdada laga siibo dadyowga horumaray fikradda nacaybka iyo xumaanta – Camaaleq iyo reer Kancaan – dhinaca kalena naxariistu waxay u baahan tahay in marka hore loogu yeedho nabadda iyo in loo oggolaado inay ka baxsadaan ‘jihada beddela’. adoo aqbalaya qiyamka aasaasiga ah ee iimaanka iyo akhlaaqda.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/01 saacada 49:XNUMX
Saddex xagal wareeg ah oo marmar ah oo kor loo qaaday. Waa wax ilaalinaya dhammaan sifooyinka saddex-xagalka iyo sidoo kale dhammaan sifooyinka goobada.
Wax saddex xagal wareeg ah waa laba wareeg oo ka samaysan saddex xariiq oo toosan.
Iyadoo tani ay ka soo horjeedo caqli-gal maalmeedka, nasiib wanaag xaqiiqadu kuma daanto dhawaaqyada caqli-galkeena. Haddii kale, ma jiri lahayn.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 saacada 20:XNUMX
U malayn maayo in sawirka aad sheegtay uu muujinayo in qiyamka diineed lagu qasbay Ilaahay. Marka loo eego inuu yahay waxa uu yahay, isaga qudhiisu waa awood go'aamin karta in qiyamka diinta qaarkood (kaas oo uu abuuray) ay muhiim u yihiin inay diidaan qiyamka anshaxa. Xaqiiqda ah in qiyamka akhlaaqdu ay ku xidhan yihiin macnaheedu maaha inay marka hore ku jiraan liiska mudnaanta.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 saacada 23:XNUMX
Waxay iila muuqataa inaadan fahmin dooddayda (ama Tirgitz). Iyadoo loo maleynayo in qiyamka diineed ay ku jiraan gacmihiisa taasoo la micno ah inuu u go'aamin karo siduu rabo, ma jirto sabab adduunka loo go'aamiyo qiyam diimeed oo ka soo horjeeda anshaxa. Muxuu sidaas u yeelayaa haddii uu u go'aamin karo qiyamka diinta qaab ku habboon akhlaaqda? Waxay soo socotaa in qiyamka diineed sidoo kale aysan ku jirin gacmihiisa.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/15 saacada 55:XNUMX
Hadday sidaas tahay runtii hore uma fahmin, laakiin xitaa taasi maskaxdayda kuma soo dhacayso laba sababood awgood:
1. Waxaa laga yaabaa in aysan suurtagal ahayn in la abuuro nidaam diineed oo si buuxda u waafaqsan akhlaaqda (sida aad ka leedahay abuurista adduun aan xumaan lahayn). Tani macnaheedu maaha in ay ku qasban tahay isaga, maadaama uu si buuxda u bixin karo, taas oo ka duwan xaaladda anshaxa. Laakin haddii loo maleeyo in uu mid u rabo sabab qaar ka mid ah, waa in ay la kulmaan qiyamka akhlaaqda qaarkood. Waxa uu u badan yahay in uu doortay mid ka mid ah kuwa run ugu yar, tani waxay sidoo kale sharxaysaa xidhiidhka weyn ee u dhexeeya qiyamka Tawreed iyo qiyamka akhlaaqda.
2. Ilaahay adduun iyo aakhiraba wuu ka abaal-marin karaa cid kasta oo akhlaaq ahaan wax u dhimaysa jiritaankeeda qiimaha Tawreed. Waxa uu hubin karaa in guud ahaan guud ahaan heerka farxaddiisu ay noqon doonto sidii ay ahayd iyada oo aan lahayn qiimaha Tawreed.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 saacada 36:XNUMX
1. Markaa taasi waxay la macno tahay in lagu qasbay. Haddii uu nidaamka u dejiyo sida uu rabo ma jirto wax caqabad ah markaa maxaa diidaya in la waafajiyo akhlaaqda?
2. In uu wax ka bedelo xil wareejintu run bay noqon kartaa. Laakin ma jirto sabab aduunka loo sameeyo. Wuxuu dejin karaa qiyamkan si uu ugu habboonaado anshaxa.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 saacada 52:XNUMX
1. Waxa uu dejiyaa nidaamka sida uu rabo, laakiin tani macnaheedu maaha in ay jirto meel bannaan oo suurtogal ah nidaam qiyam diimeed oo leh 0 ku xadgudubka anshaxa. Isagu ma dhisi karo nidaam diimeed, ama ka dooran karo kuwa wax u dhimaya akhlaaqda ugu yar.
Maadaama uu dooran karo in uusan abuurin adduun, laakiin (laga yaabee) ma uusan abuuri karin adduun leh dhammaan faa'iidooyinka adduunkan laakiin leh 0 shar ah. Tani macnaheedu maaha in abuurista adduunka lagu qasbay isaga, laakiin haddii uu rabo (!) In la abuuro adduun leh doorasho xor ah markaas waxaa jiri doona xumaan.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 saacada 32:XNUMX
Ha fahmin ku adkaysigaan.
Haddii aysan jirin wax xaddidaad ah oo aan isaga ku xirneyn, maxaa u diidaya inuu go'aansado in naag Cohen ah oo la kufsaday la kala tago ninkeeda? Wuxuu go'aamin karayey caksigeeda (na sii Tawreed iyada oo aan faahfaahintan). Waa maxay caqabada ka hortaagan in ay taasi ku dhacdo isaga? Marka la eego macnaha sharka, waxaan sharxay in sharciyada adag ee dabeecadda aysan jiri karin iyada oo aan lahayn dhibco dhib iyo xumaan. Nidaam kale ma jiro. Laakiin nidaamyada qawaaniinta diintu wax caqabad ah kuma laha iyaga. Waa gar-daran. Haddaba maxaa macnaha guud ee diinta ka hor istaagaya inuu go'aamiyo afar iyo toban amar oo keliya iyada oo aan naagtii Cohen?
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 saacada 34:XNUMX
Rabbi Naraali, waa in aad qortaa tiir (ama adiga ayaa qortay mana ka warqabo)
Marka laga hadlayo qaybta xalaasha ah ee xaqiiqada ku xidhan iyo sidoo kale la oggol yahay ee la diiday iwm.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 saacada 45:XNUMX
Maan fahmin codsiga
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/15 saacada 24:XNUMX
[Waxaad samaysay wax aan ahayn guuleyste ahaan. Kaliya waxaan dareemay wax aan caddayn (oo waxay ka soo baxeen erayadaada anigana) ee maaha sida fiiqan ee aad u qeexday.
Sawirku waxa uu muujinayaa in aanay ku kala duwanayn xalaqada iyo akhlaaqda marka ay timaado isqabqabsi,balse marka laga reebo in bini’aadamka oo dhami ay garwaaqsan yihiin kala duwanaanshiyahaas,waxana haboon in maskaxdooda la kala saaro. Xitaa haddii qofku ka qoomameeyo luminta qof aan helin mitzvah ama dareenka gaarka ah ee la socda jiritaankiisa, weligay maan maqal qof ka qoomameynaya inuu lau soo maro sababtoo ah diidmo ( diidmo la taaban karo sida shatanz in tassel ama yibum , Marka laga hadlayo Madin, waxaa jira diidmo la taaban karo, tanina waa Tza'a), iyo xagga akhlaaqda, dadka caadiga ah waxay sidoo kale ka qoomameeyaan inay ku xad-gudbeen sharciga akhlaaqda, sida inay ka fogaadaan inay badbaadiyaan qowmiyad kosher ah Shabbat.
Markaa waxa aad ku macnaysay aragti ah in xalaqada ilaahay uu hagaajinayo dhaawaca ruuxiga ah ee akhlaaqda aanu hagaajinayn dhaawaca jidheed. Laakiin sidee bay uga jawaabtaa, markaa haddii aysan jirin wax damiir ah markaa maxay dadku daneeyaan waxyeelada jireed? Miyay khaldan yihiin (iyo aniga guud ahaan) oo ma jiraan xiisad caadi ah halkan laakiin kaliya dareen jaahilnimo?
Si aad u sharaxdo mid waa in si macquul ah loogu daro in ilaa amarrada ay jiraan iyo xitaa marka la diido markaas amar kasta ayaa sii jiri doona. Tani waxay ka dhigan tahay in amarku uusan ahayn tilmaanta wax ku oolka ah "hadda sidaas yeel" laakiin waa tilmaanta mabda'a, iyo halkii isku dhacu runtii halkan waxaa ka jira amar iyo amar halkan iyo sidaas darteed sidoo kale halkii khilaaf iyo go'aan cad waxaa jira dhibaato. (Marka laga reebo in si muuqata looma baahna in la yimaado xaqiiqooyin ruuxi ah oo kala duwan).
Taasna asal ahaan waxa ay Raqa leedahay (runtii waxay ku qoran tahay baahi iyo cusboonaysiin ololaha dabbaaldegga sida aad ii soo gudbisay. Anigu ololaha maan darsin ee waxaan arkay oo keliya inuu leeyahay haddii qof ku afuufo shofar Rosh Hashanah ah oo ku dhacaya Rosh Hashanah. on Shabbat Dhab ahaantii laakiin mabda'a. Anigu * runtii * ma fahmin arrintan, ma ii sharaxi kartaa? (Jawaabta halkaas waxaad ku qortay inaad runtii u malaynayso). Amarkani waa tilmaamo wax ku ool ah, ma arko wax macne ah oo sheegaya in dhinac aan amrayo A, dhanka kalena waxaan amrayaa B iyo runtii waxaan amrayaa B.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/16 saacada 04:XNUMX
Ma fahmin sababta aadan u arkin murugada luminta mitzvah. Dabcan waa iska leh. Sida qof aan soddohdii ahayn sababtoo ah wuu xanuunsanayaa. Qisooyinkana waa la yaqaanaa culumada oo u nisbiya una sheega in ay waajib ku tahay xaaladdiisa. Marka laga soo tago, samaynta lao nacaybka ah waa xaalad caadi ah oo dadku waxay la qabsadeen. Tusaale ahaan dhogorta dhogorta iyo linenka, qofna ma xasuusto in uu jiro shatnaz. Laakiin bukaanka USSR waa xaalad naadir ah oo aad looga xumaado.
Dabcan dadku waxay daneeyaan waxyeellada jireed iyo murugada kuwa kale. Maxaa iska leh inaan si sax ah u dhaqmay. Iyo in haddii uu qofku ku dhaco masiibooyinka dabiiciga ah aanan ka shallayn. Markaa marka aan dambiga galo (xitaa haddii ay sax tahay) waan hubaa inaan ka xumahay. Ku xishoon dadka reer Hezi ee shil galay oo aan loo eedayn, oo xataa waxyeelada lafteedu ay leedahay, intee in le'eg ayay ka murugoonayaan dhibka ay geysteen.
Mar dambe ma xasuusto ereyadayda aad soo xigatay in amarku jiro, laakiin waxaan si weyn uga qoray buugga saddexaad ee taxanaha macquulka ah ee Talmudic. Buuga laftiisa oo dhami waxa uu go'ay in la kala saaro amarka iyo waxbaridda la taaban karo. Amarku waa nooc ka mid ah xaqiiqo jirta, edbinta la taaban karona waa mid ka soo jeedda oo kaliya. Xaqiiqo xalaal ah. Taas uun baad i xasuusisay.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 saacada 01:XNUMX
"Xigashada" ereyadaada waxay ku jirtay jawaabta dunta halkaas markii aan isku dayay inaan ka soo gabagabeeyo RAKA in amarku uusan ahayn ereyga Ilaah (haddii ereyga Ilaah kaliya uusan ka tirsanayn mitzvah xaalad uu Ilaah ugu dambeyntii amrayo in aan la samayn oo xitaa mamnuuc in la sameeyo) oo waxaad ku jawaabtay, "Anigu waxaan ku raacsanahay falanqaynta u arka saldhigga aragtida mitzvos inay tahay nooc ka mid ah xaqiiqooyinka oo aan ahayn jiritaanka ereyga Ilaah." Waxaa laga yaabaa in aanan si sax ah u fahmin ujeedadaada halkaas, laakiin indhahayga erayada RAA weli waa kuwo aan la fahmi karin. Haddii aad iga caawiso inaan fahmo fikradan aad baan ugu mahadcelin lahaa.
Dhanka murugada, waxay iila muuqataa in ay kala duwan yihiin qaladka dadka oo caado ka dhigtay ( dhaqan ka soo horjeeda kutubta) iyo sal dhab ah, waayo waxa ay ka xun yihiin oo kaliya in aanay cidhibta cagta saarin oo aanay ka xumaan taxadir. iyo dabaysha xataa haddii la xasuusiyo. Laakiin anigu waxaan ka dhigayaa qodobkaas.
Iyo waxa ugu muhiimsan - haddii akhlaaqdu ay ku xiran tahay kaliya sababtoo ah lagama maarmaanka ah markaa meesha ay jirto lagama maarmaanka u ah anshaxa ma jirto wax dhibaato ah oo caadi ah xitaa si loo waxyeeleeyo kun waxyeelo. Maxaa loogu jawaabaa in dadku ay dareemaan khilaaf oo weliba ay u jeediyaan Ilaah hortiisa sida aad tiirka ku sheegtay? Jawaabtaadu waa inta aan fahamsanahay inay khalad tahay, runtiina ma jirto dhibaato caadi ah oo haba yaraatee wax loo dhimo, marka uu Eebbe ka noqday amarkii akhlaaqda ahaa ee ahaa inuu ka fogaado waxyeellada. Aragtida hagaajinta dhaawaca ruuxiga ah iyo in aan la hagaajin dhaawaca jirka waxaa loogu talagalay kaliya in lagu sharaxo dareenka dadka ee maaha in la caddeeyo. ma sidaasaa?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 saacada 52:XNUMX
Tan waxaa lagu fahmi karaa soo jeedintayda faa'iidooyinka ruuxiga ah. Kuwani waxay soo baxaan xitaa marka aan waajib igu ahayn inaan sameeyo ficilka iyaga keena. Laakiin dabcan faa'iidada kaliya kuma filna in la qeexo mitzvah. Sarbeeb ahaan waxaan dhihi lahaa amarku sidoo kale wuu jiraa weligiis. Laakiin mararka qaarkood waa in loo gudbiyaa amar kale dartiis.
Waxa tusaale u ah arrin ay samaysay in wakhtigu uu sabab u ahaa dumarka. Oggolaanshaha ku dhawaad ​​dhammaan garqaadayaasha in ay jirto qiimo samaynta, iyo intooda badan xitaa waxay u arkaan inay tahay mitzvah jira (Rabbi Brish macnaheedu waa in Safra ay qortay inay diidayso maya). Laakiin marka la eego amarka Ilaahay dumarka waa laga dhaafay. Uma baahnid inaad tan sameyso, haddaba maxaa mitzvah jira haddii ay si kastaba yeeleen?
Waxaan u maleynayaa inay jirto dhibaato caadi ah oo waxyeello ah, murugaduna waa mid dhab ah oo kaliya maahan nafsiyeed. Burburinta Akhlaaqda Si ka duwan Ruuxa Ilaah ma tirtiro xitaa haddii aad samaysay wixii aad u baahnayd.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 saacada 15:XNUMX
Maahmaahda ah in amarku waligii jiro laakiin ay tahay in la dhaafo ayaa tusinaysa dhibka jira. Tani waxay suurtogal tahay marka isha weerarku ay ka timaaddo xaqiiqooyin ruuxi ah oo aamusan oo geeska ah oo aan u muuqan inay suurtogal tahay marka mitzvah uu yahay qof caqli badan oo ay tahay inay ii sheegto waxa ay rabto inaan sameeyo. Markaad sidaa sameysid, waxaad u ekaysiinaysaa amarka amarka shafarka Gd ee Shabbat, halkaas oo runtii Illahay iga mamnuucayo inaan kufsado (wuxuu igu amray inaan addeeco xikmadaha. Waxaan qirayaa inay adag tahay in la qeexo kala qaybinta, laakiin haddii kale waxay u muuqataa inay jiraan. In la dhaho waxaan samaynayaa amarrada Eebbe intaan ku caasiyoobay oo aan afuufay indhihiisii ​​sharafta lahaa in kasta oo ay mamnuuc tahay waa arrin yaab leh. MM Haddii ay sidaas tahay wuu ka fiirsan doonaa (sida ay tahay waxa xiiso leh in la barbardhigo mitzvah soo socda ee dembiga iyo dooda aad keentay R. Asher Weiss, waxaan sidoo kale ka fiirsan doonaa arrintan. Iyo dhadhanka hilibka doofaarka ayaa lagu liqay. si ka mamnuuc ah Daaurita laga yaabaa in sidoo kale Raqa qirto in aanu jirin amar cunno)
Ma aan fahmin dhibaatada caadiga ah ee ay tahay in la waxyeeleeyo haddii kiiska laga hadlayo uusan jirin amar ka yimid Gd oo mamnuucaya in la waxyeeleeyo dhibaatadan gaarka ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ula jeeddaa in xitaa akhlaaqda amarka ah in aan waxyeello loo geysan ay sii jirto laakiin ay tahay in laga gudbo. Haddii amarku yahay hay'ad caqli badan oo wax walba garanaysa oo go'aansata waxa lagu sameeyo kooxda markaa arrintaan aniga iima fahmeynin sida kor ku xusan. Sida la sheegay waxaan ka fiirsan doonaa tan, malaha waxaan la kulmay falanqaynta square.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 saacada 41:XNUMX
Marka la eego mamnuucida Dauriyta iyo Mitzvah, tusaale wanaagsan oo ah allabari la sameeyey (haddii cuntada mamnuuca ah sida cuntadu ay hadhsan tahay oo aanay jirin mitzvah ama haddii ay sidoo kale jirto mitzvah iyo sidoo kale dembi galay) waa dhibaatada gabadha walaalaha. Beit Hillel ayaa mamnuucday iyo canuga bastard. Ma laga yaabaa in ra'yigooda, xitaa kuwa u barooranaya dhibaatada inanta ay buuxiyaan mitzvah baroorta?! (Waa suurtagal in la kala qaybiyo xeerarka gudaha Mitzvah iyo inta u dhaxaysa xeerarka mitzvos kala duwan. Laakin nuxurka oo dhan waa in ay aniga ila tahay mid isku mid ah)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 saacada 55:XNUMX
Waxaa jira xaqiiqooyin ruuxi ah, sida aan ku qoray tiirka. Laakin ma laha wax sharci ah ilaa ay jirto hay'ad u sharciysa iyaga iyo/ama amra.
Ma jirto farqi u dhexeeya kiiskeena oo u dhexeeya mamnuucid iyo waajibaad la'aan. Adiga laftaadu waa qirtay, ka dibna si dhib leh uga dhig mid adag. waan yaabay!
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 saacada 01:XNUMX
Maxaad u malaynaysaa in ay u janjeerto marka hore, in ereyada Raqa ay sidoo kale ku jiraan lau Dauriyta kasta oo aan la diidin sababtoo ah ficilka qaar haddii uu jiro ficilka oo uu ku xad-gudbay lao wuxuu ku guuleystey mitzvah oo uu ka baxay shaqadii, ama hadalkiisa. kaliya mamnuucida Durban ee burinaysa Dauriyta mitzvah?
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 saacada 14:XNUMX
Looma baahna ra'yi iyo caqli marka hore. Waxay iila muuqataa in ay jirto caddayn tan ka timid xaqiiqda ah in mitzvah soo socda ee dembigu uu buray. Oo mar horeba kii ugu horreeyay wuxuu ku adkaystay faraqa u dhexeeya xeerkan oo wuxuu sameeyay maya diidmo ah. Si kastaba arrintu ha ahaatee, inta badan, marka sharciga loo diido sababo jira (tusaale ahaan, isku mar maaha) waa xaalad Maxkamadda Sare.
Fikradaada, ma jirto baahi loo qabo aayad tan, maadaama xaaladda lafteeda aysan wax qiimo ah u lahayn mitzvah noocan oo kale ah. Laakiin Gemaradu tan waxay ka barataa "kan neceb dhaca soogalootiga." Waxaa intaa dheer, sida uu qabo Ths.
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 saacada 29:XNUMX
Waxaan kor uga faallooday mitzvah soo socda ee dembiga laakiin waxaan kaliya ka fikiray tusaale ahaan sukkah la bililiqaystay halkaas oo falka mitzvah uusan ahayn dembi (oo waxaa jira dooddaada ereyada R. Asher Weiss iyo Ezal). Hadda waxaan Wikipedia ku arkay tusaale ah cunista matzah lagu rusheeyey Pesach waxayna ku andacoonayaan halkaas (Maan hubin isha) in aysan ka bixin jidkooda si ay u qabtaan matzah oo aysan u ilaalin matzah matzah. Taasna runtii waxay caddaynaysaa sida aad tiraahdo (laga yaabee kaliya haddii ay jirto marka uusan haysan matz kale oo sidaas darteed way caddahay in Eebbe u diidayo inuu cuno matzah baabtiiska).
Aayad la'aanteed ma garanayno waxa soo koraya, taas oo ah, waxa uu Ilaah amrayo, laga yaabee in matzah la dhuuqay uu amar ku bixiyo haa in la cuno haddii aysan jirin matz kale. Ma garanayo arrinka laakiin tuuganimada qofka la sheegay in uu soogalootiga ah ayaa ah arrin cusub xitaa ka dib markii tuuggu iibsaday iyo soo galootigiisii ​​dhammaan ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka oo loo oggolaaday in uu cuno cunto xumo weli ma u qalmin meesha allabariga. [Ka sokow, fikradda caddaynta in haddii kale "ma jirto baahi loo qabo aayad" waa arrin shaki leh oo gaar ahaan marka la eego tiirarka aayad ka soo horjeeda, sababtoo ah waxaan leenahay fikrado halkan iyo halkaas oo aan dabcan qirto. in RAKA uu yidhi hadalkiisa oo aad u malaynayso in hadalkiisa la aqbali karo dhib baan ku qabaa inaad u baahan tahay aayad si aad sharaxaaddan uga baxdo]
Si kastaba ha ahaatee, ka soo qaad sida aad sheegtay in ay soo baxday in qof kasta oo cuna matzah la dhuuqay uusan haba yaraatee ilaalin amarkii matzah oo uu jabiyay mamnuucidda wax-quudinta. Laakiin ku alla kii wax afuufay oo sabtida ka afuufay baarka aawadiis wuxuu lahaa amar uu ku afuufo, oo wuxuu dhex maray Shabbat Durban.
Tani waxay ka dhigan tahay in xeerarka diidmada ee Tawreedka dhexdiisa Mitzvah "lafteeda" waxaa lagu qeexay kaliya xaaladaha aan la diidin. Laakiin xeerarka diidmada Durban Mitzvah Dauriyta "waa hadh" marka laga reebo in dhab ahaantii waa mamnuuc in la ilaaliyo iyo sida sarbeebta ah in amarku weligiis jiro laakiin mararka qaarkood waa in la jebiyo.
10 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Sida soo jeedintaada in sharciga diiniga ah, ama ugu yaraan qiyamkiisa hoose, laga soo qaatay xaqiiqooyin madax bannaan oo lagu soo rogay Ilaah - waxay iila muuqataa in halkii dib loo cusbooneysiin lahaa cabbir kale oo isku xira Ilaah, dhibaatooyinka fiqi ahaaneed ee ka dhashay, tani waxaa lagu dhejin karaa fikradda ah baahida sare ee tababarka aadanaha. Si loo kordhiyo tababarka iyo doorashada nin, "Ilaah wuxuu leeyahay wax badan oo Tawreed iyo mitzvos" iyaga, xitaa kuwa ka soo horjeeda anshaxa. Waxaan xusuustaa inaad ku qortay mid ka mid ah tiirarka in ay si sax ah u tahay tirada badan ee qiyamka taas oo macno badan siinaysa doorashada, maadaama ay jiraan iskudhafyo badan oo suurtagal ah oo u dhexeeya qiyamka.
10 Adar 03, 2022 - 16/30/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxa aan ugu yeero qiimaha diinta waxaad u taqaanaa tababbarka aadanaha. Haddaba sidee ayay uga duwan tahay? Ma waxaad ula jeeddaa in aad tidhaahdo haba yaraatee wax hadaf ahi ma jiraan shayga aan ka ahayn dhamaystirka ninka? Waxay raacaysaa in dhammaan sharciyadu ay yihiin kuwo gebi ahaanba macne ah (wuxuu dooran karaa sharciyo kale iyo xitaa kuwa ka soo horjeeda). Laakin markaas doodii Tirgitz ayaa soo noqotay, maxaa u jira kiisas uu ku xukumay akhlaaqda.
10 Adar 03, 2022 - 22/07/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxaad qortaa in qiyamka diineed lagu qasbay Gd, laakiin si kastaba ha ahaatee haddii ay dhacdo isku dhac u dhexeeya qiyamka diinta waxay sameyneysaa mucjiso waxayna ka hortagtaa waxyeelada diinta ee ay keento samaynta hore. Haddii aanan fahmin sida qiyamka diinta loogu qasbo isaga - ka dibna wuu joojin karaa mar kasta oo uu rabo. Oo haddii uusan rabin inuu farageliyo dabeecadda (xitaa dabeecadda diinta), muxuu u farageliyaa kiisaska iskahorimaadka u dhexeeya qiyamka diinta?
11 Adar 03, 2022 - 01/53/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Kuma qasbana. Isaga oo lagu qasbay in tani ay tahay qiimaha. Xataa xagga akhlaaqda kuma qasbana in uu sidaas sameeyo ee waa in tani ay tahay qeexidda wanaagga.
19 Adar 03, 2022 - 22/04/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Wixii ku saabsan waxaad halkan ku qortay”
"Inkasta oo fikirka dheeraadka ah lagu doodi karo in aragti ahaan haddii aan sameeyo wax la oggol yahay markaa dhaawaca ruuxiga ah ayaa sidoo kale laga fogaaday. Waxa la odhan karaa Gd waxa uu sameeyaa mucjiso oo waxa uu ka ilaaliyaa dhibta soo gaadhaysa si aanay u dhicin xumaan qof xaq ah oo aniga oo kale ah oo sharciga ku kalsoon. ”
Hadday sidaas tahay, muxuu had iyo jeer u samayn waayay mucjisooyin si uu uga hortago dhammaan dhaawaca ruuxiga ah ee dadku sameeyaan, haddii ay sameeyaan wax la oggol yahay iyo haddii kale?
20 Adar 03, 2022 - 19/24/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Sababtoo ah wuxuu leeyahay dan ah in masiirka adduunku uu ku xirnaan doono ficilkeena. Waxay la mid tahay in la is weydiiyo maxaad na siinaysaa doorasho oo aan had iyo jeer inagu yeelin in aan si fiican u dhaqno doorasho la'aan (oo dhab ahaantii nama abuurin innaba).
20 Adar 03, 2022 - 19/41/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Dunidu dhab ahaantii waxay ku xirnaan doontaa ficiladeena, kaliya dhaawaca ruuxiga ah kuma xirna falkeena, sababtoo ah halkaas sida ku cad waxaad qortay waxay u egtahay inay soo farageliso. Intaa waxaa dheer, haddii Ilaah doonayo in dhaawaca ruuxiga ah uu ku tiirsanaado falkeena sidoo kale, markaa sababta qof wax sameeyay loo oggol yahay inuu soo farageliyo si looga hortago dhaawaca ruuxiga ah? Ka dib oo dhan, waxay dhar u tahay siyaasadiisa in dunidu ay ku xirnaan doonto ficilkeena.
20 Adar 03, 2022 - 23/28/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxay ku xirnaan doontaa ficiladeena macnaheedu waxay kuxirantahay haddii aan sameynay fal la ogolyahay ama mamnuuc ah.
19 Adar 03, 2022 - 22/33/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Ee ku saabsan waxa aad ku qortay cutubkan:
"Waan sharxi doonaa su'aashiisa. Sida habkayga uu qabo, Ilaahay waxa uu ina farayaa in aynu yeelano awaamiir ka dhan ah akhlaaqda si loo horumariyo qiyamka diinta. Haddii ay sidaas tahay, Tirgitz ayaa ku doodaya, waxay u muuqataa in qiyamka diineed sidoo kale lagu qasbay isaga oo aan ahayn natiijada rabitaankiisa madaxbannaan (sharcigiisa madaxbannaan). Haddii awaamiirtu aanay ahayn "xaqiiqo halaq ah" oo Ilaah lagu soo rogay balse uu abuuray sharcigiisa, markaas si ka duwan buu u dejin karay iyaga. Xaaladan oo kale waxaan filayaa hadii uu rabo (oo laga dhaxlo) in uu wanaag sameeyo in aanu soo saarin shuruuc ka hor imanaysa akhlaaqda. Jiritaanka khilaafaadku waxa uu tilmaamayaa in xeerarkii xalaasha (ama qiyamka diineed, ee isla xeerarkii xalaalaynta) ay iyaguna ku khasban yihiin Ilaahay, sidaa awgeedna isaga ayaa la qabtaa (ama na xoog sheegaa) isaga oo loo baahan yahay khilaafyadaas”.
Waxay ka dhigan tahay erayadaada in dhammaan mitzvos iyo sharciyada Halacha lagu qasbay Gd, laakiin dooddaada tan waxaa laga soo saari karaa oo keliya marka la eego sharciyada iyo mitzvos ka soo horjeeda anshaxa. Amarka sida Shema oo la akhriyo ma aha mid ka soo horjeeda akhlaaqda sidaa darteed looma baahna in lagu khasbo Gd ama in ay tahay xaqiiqo xalaal ah.
Taas haddii aan ka soo gudubno, waxaa dhici karta in xitaa haddii Eebbe uu amro wax u muuqda akhlaaq darro, ay tahay in laga hortago caddaalad-darro weyn oo xagga akhlaaqda ah. Tusaale ahaan, arrinta dhibanayaasha. Sida muuqata Ilaahay wuxuu amray in xoolaha la laayo si aan loo baahnayn. Laakiin waa suurtogal in amarkan la'aanteed ay dadku si buuxda u diidi lahaayeen diinta sababtoo ah kuma jiraan qayb muhiim ah oo nolosha diineed ka hor bixinta Tawreed. Taasi waa, u gudubka diinta Yuhuudda aad bay u fiiqan tahay oo waxay khatar gelin lahayd isbeddelkan inuu dhaco.
Intaa waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in Ilaah mararka qaarkood uu mudnaanta siiyo rabitaankiisa (oo aan lagu qasbin) oo ah wax ka muhiimsan waxyeellada akhlaaqda ee makhluuqaadkiisa. Tusaale ahaan, aan soo qaadano doonista Eebbe ee ah in la abaal-mariyo. Haddii ujeedadaas awgeed uu mararka qaarkood ku qasbo inuu wax yeelo qof ka mid ah makhluuqaadkiisa, waxaa laga yaabaa inuu diyaar u yahay inuu sidaas sameeyo si uu u horumariyo rabitaankiisa, inkastoo uu mar uun ka tanaasuli karo rabitaan, haddana wuxuu ka hormariyaa shay ka muhiimsan waxyeellada akhlaaqda. . Yacni waxaa dhici karta in xitaa awaamiirta ka hor imaanaysa akhlaaqda aan lagu qasbin oo aan ahayn xaqiiqooyin xalaal ah, haddana uu doorto in uu amro maadaama ay isaga uga muhiimsan tahay xumaanta akhlaaqda. Oo haddii aad tiraahdo tani waa doorasho akhlaaq darro ah oo ka soo horjeeda malaha ah in Ilaah had iyo jeer yahay akhlaaqda, waxaan kuugu jawaabi doonaa in sidoo kale Ilaah u noqdo mid akhlaaqda naftiisa. Taasi waa, markuu ka tanaasulo rabitaankiisa, waxaa jira dhaawac naftiisa ah (nooc ka mid ah tixgelinta noloshaadii hore).
20 Adar 03, 2022 - 19/27/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Runtii, dooddu waxay ka hadlaysaa oo keliya sharciyada anshaxa ka soo horjeeda.
Xagga dhibanayaasha, maan fahmin su'aasha. Oo dhammaantiis waxaad bixisaa sharaxaad ku saabsan amarrada allabariga. Hagaag Oo haddii aad ula jeedo in tani ay tahay sharraxaad anshaxeed oo aan toos ahayn, fikradayda waa wax aan macquul ahayn.
Markaad tidhaahdo wax indhihiisa ku roon, waxay la macno tahay inuu leeyahay yool ujeedo ah oo aan ahayn natiijada doonista Eebbe oo keliya.
20 Adar 03, 2022 - 19/47/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Xagga allabaryada, waxaan ula jeeday inay jiraan amarro noo muuqda annagoo ka soo horjeeda anshaxa, laakiin dhab ahaantii qotodheerkooda waxay kor u qaadaan anshaxa. Ma fahmin sida ama sababta, laakiin waxaa jiri kara sharraxaad qoto dheer oo ka dambeeya iyaga oo gacan ka geysanaya horumarinta anshaxa (dhammaan amarrada anshaxa ka soo horjeeda waa daruuri, laakiin ugu yaraan qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa).
Sida mudnaanta indhihiisa, waxaan ula jeedaa "shakhsi ahaaneed" rabitaannada iyo rabitaannada Ilaah. Yacni, maaha wax dibadda lagaga soo qasbay, ee waa rabitaankiisa gudaha ah. Ma hubo in ereyga gar-qaadid uu halkan ku habboon yahay doonista Eebbe. Sida qof rabitaankiisa ah inuu noqdo ciyaartoy shax shahaado haysta aan loogu yeedhin rabitaan gar-darro ah (kamana qasbana dibadda). Waa rabitaan qofeed. Waxaa laga yaabaa in Ilaah doonayo in uu "u noqdo ciyaaryahan shataran oo shahaado leh" meel gaar ah, taas darteedna wuxuu diyaar u yahay inuu u huro waxyeellada akhlaaqda dadka qaarkood mararka qaarkood.
20 Adar 03, 2022 - 23/31/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Laga yaabaa in aad.
Way igu adag tahay inaan ka hadlo shakhsiyadda iyo rabitaannada Eebbe.
21 Adar 03, 2022 - 00/19/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Anigu kama hadlayo shakhsiyaadka loo hanjabay laftooda. Waxaan leeyahay waa laga yaabaa inay jiri karto wax Eebbe idmo, in kastoo aan lagu khasbin la’aanta (xaqiiqda xalaaqiis ah), haddana ay isaga uga muhiimsan tahay dhaawac xagga akhlaaqda ah oo makhluuqiisa ku dhaca, sidaas darteedna uu amro.
21 Adar 03, 2022 - 07/03/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Haddii aan lagu khasbin oo aysan jirin wax ujeeddo ah oo lagu maamulayo markaas waa go'aankiisa gardarrada ah, iyo draa kushya duchy. Ama waa gar-daran ama waa lagu qasbay (macnaha ah in qiyamka akhlaaqdu ay nagu khasbaan yihiin. Ansigooda waa lagu qasbay, ma aha habdhaqanka sida ay qabaan). Ma arko suurtagal saddexaad.
21 Adar 03, 2022 - 11/28/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Qofka doonaya in uu noqdo ciyaaryahan shataran oo shahaado haysta ma yahay rabitaankiisa gardarada ah? Mise waa lagu qasbay?
21 Adar 03, 2022 - 12/39/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Dardaaran kali ah. Haddii ay ku jirto markaas waa lagu qasbay isaga.
21 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxaa jira arrin ku saabsan sirta shaqada baahi sare iyo rabitaan Ilaah inuu bixiyo. Labadaba, Ilaahay wuxuu inooga baahan yahay inaan gaarno yoolalkaas. Si loo gaaro yoolalkaas, waa lama huraan in qof akhlaaq ahaan dhaawac loo geysto. Sida ay dadku u tijaabiyaan xayawaanka arrimo caafimaad, waxaa suurtogal ah in Ilaah noo isticmaalo xitaa haddii ay mararka qaarkood waxyeello noo geystaan, baahidiisa.
21 Adar 03, 2022 - 14/59/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
AHN. Markaa isaga ayaa lagu qasbay. In la abaalmariyo waxay la macno tahay in aad kaamilan tahay, qeexidda kaamilnimaduna gacantiisa kuma jirto.
21 Adar 03, 2022 - 15/41/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waa maxay sababta ay lama huraan tahay in isaga lagu khasbo. Waxaa laga yaabaa inuu doorto. Ka dib oo dhan, dhammaan baahida loo qabo in la yiraahdo waa lagu qasbay waxay ka timid sharraxaadda in Ilaah uusan dooranayn wax xun. Laakiin waxaan tusaale u soo qaatay in marka loo baahdo in bini'aadamku uu isagu danahiisa u doorto wax anshax xumo ah iyo sida saxda ah (tijaabo caafimaad oo xoolaha lagu sameeyo)
21 Adar 03, 2022 - 17/02/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Bini'aadamku waxay tan u sameeyaan qasab. Cudurku waa lagu qasbay iyaga iyo sidoo kale dariiqa bogsashada.
21 Adar 03, 2022 - 17/46/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxay ku samayn karaan tijaabooyin aadanaha ama way iska daayaan daawada. Taasi waa, ma jiraan wax lagama maarmaan ah oo qiimo leh ama xaqiiqo qiimo leh oo ku qasbaysa in la sameeyo tijaabooyinka bahalka.
21 Adar 03, 2022 - 18/51/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxaa jirta in tijaabo loo baahan yahay in la barto, waxaana jirta xaqiiqo akhlaaqeed oo ah in Shabbadu ka sarreeyo aadanaha.
21 Adar 03, 2022 - 19/43/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Haddaba waa maxay sababta qofku u imanayo xaqiiqooyin xalaal ah oo lagu qasbay Gd. Waxa la odhan karaa waxa jirta xaqiiqo akhlaaqeed oo odhanaysa intii la isku khilaafi lahaa baahida Eebbe iyo xumaanta akhlaaqda ee bani’aadamka, waxa jirta xaqiiqo akhlaaqeed oo odhanaysa waxa ka wanaagsan in bani’aadmiga la dhibaateeyo intii loo tanaasuli lahaa baahida Eebbe.
21 Adar 03, 2022 - 19/48/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Baahida Eebbe sidoo kale waa lagu qasbay, ama lagama maarmaan ma aha oo sabab uma aha diidmada qiyamka akhlaaqda.
Aragtidayda ma jirto waddo looga baxo arrintan: ama qasab iyo mid gardaran. Oo gar-daran ma diido akhlaaqda. Mar kasta oo aad ka timaaddo jiho kale laakiin jawaabtu waa isku mid. Bustuhu waa gaaban yahay, waxaad dabooli kartaa lugahaaga ama madaxa laakiin labadaba maaha.
21 Adar 03, 2022 - 20/13/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Hagaag, laakiin lama huraantu maaha xaqiiqo xalaal ah. Sida aan kaaga fahmayo xaqiiqooyinka xalaasha ah ama akhlaaqda ayaa ah xaqiiqooyin ku jira saaxadda la rabo ee maaha wax jira.
21 Adar 03, 2022 - 20/54/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Dhib malaha. Weli waxaa jira waxyaabo lagu qasbay. Laakiin intaas wixii ka dambeeya, baahidani waa xaqiiqo abuurta OGOL. Dooddu waa in sharciyada lagu qasbay isaga sida qiyamka anshaxa. Muhiim iima aha hadday tahay muquunin xaqiiqo iyo baahi ama si toos ah. Weli waxaan u maleynayaa inay kuwani yihiin qiyamka, laakiin maxay muhiim u tahay?!
21 Adar 03, 2022 - 21/07/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Tani waa tii aan ku dooday jawaabta hore. In xaqiiqada baahidani wax abuurto, balse ay tahay mid ka soo jeedda xagga akhlaaqda ee maaha mid ka soo baxaysa xalaqo ama si kale. Sida tijaabada xoolaha ee aan dadka lagu tijaabin ay akhlaaq ahaan u habboon tahay aniguna ma aan tegin.
21 Adar 03, 2022 - 21/12/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Khasab maaha akhlaaqda. Qaar baa u baahan ama qiimeeya, anshax ama maya. Tusaale ahaan, tababarka Ilaah maaha baahi akhlaaqeed marka la eego macnaha caadiga ah. Xataa mamnuucida cunista hilibka doofaarka uma muuqato muujinta xaqiiqda akhlaaqda.
21 Adar 03, 2022 - 21/19/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxa aan ula jeeday waxa uu ahaa in Ilaahay uu amro awaamiirta anshaxa ka soo horjeeda baahiyo isaga ku jira awgeed. Laakiin ka hor inta aanu amrin waxa uu ku jiraa laba daran mid dooro in uu baahidiisa u kala hormariyo, ama in uu ka fogaado xumaanta akhlaaqda ee bani aadamka. Dhibaatadani waxay ku jirtaa dhinaca akhlaaqda. Si la mid ah dhibka in tijaabo lagu sameeyo dadka ama xoolaha ayaa ah dhanka akhlaaqda.
21 Adar 03, 2022 - 21/32/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Markaa waxa jira qiyam diineed (oo aad dooratid inaad ku tidhaahdo lama huraan) oo lagu khasbo, kaliya go'aanka dhibka u dhexeeya isaga iyo akhlaaqda waa go'aan anshaxeed. Ka soo qaad inaad saxan tahay, haddaba waa maxay? Aaway dooda? Intaa ka sokow, aniga aragtidayda go'aanka u dhexeeya qiyam diimeed ama baahi iyo qiyam akhlaaq laftiisa maaha mid heer akhlaaqeed ah.
22 Adar 03, 2022 - 10/57/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Inta aan ogahay, Rabbi Michi wuxuu sheeganayaa tan:
A. Ilaah wuxuu rabaa wanaag sababtoo ah isagu waa wanaagsan yahay
B. Nidaam diineed la mid ma aha nidaamka akhlaaqda
saddexaad. Khilaaf u dhexeeya nidaamka diineed iyo nidaamka akhlaaqda, waa in mararka qaarkood la doortaa nidaamka akhlaaqda
Maxaad u sheegan weyday in isku dhacu uu yahay kaliya male-awaal (sida uu yahay habka Rabbi Lichtenstein oo uu u hiilinayo hab-dhaqanka ka jira degmooyinka diinta)?
D. Waxaan fahamsanahay in ay lama huraan tahay in nidaamka diiniga ah uu sidoo kale ku khasban yahay Eebbe, haddii kale muxuu u amrayaa akhlaaqda ka soo horjeeda?
Waxa la fahmaa waa maxay sababta naloo oggolaaday in la doorto nidaamka akhlaaqda haddii khilaaf dhaco, mar haddii Eebbe u doortay nidaamka diinta ee khilaafkaas?
Xalka suurtagalka ah ayaa ah in nidaamka diineed uu bixiyay Ilaah, laakiin tan iyo markii uu ku xayiray ilaalintiisa, waxaan u qaadaneynaa in xaqiiqda la siiyay uusan ahayn mitzvah, sidaas darteed dooro nidaamka akhlaaqda.
Waxaas oo dhan marka loo eego habka garaadka wiilkeena, Ramad Shlita, waxay aamin ku yihiin habkiisa oo aan aqoonsanayn xulashooyinka doonista Ilaah (oo arag cilmiga xorriyadda). Iyo doc iyo il.
22 Adar 03, 2022 - 14/06/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Haddii aad akhrin lahayd ereyada garaadka xooggaaga waxaad arki lahayd inaan qorayo inaan naloo ogolayn, sababtoo ah isaga qudhiisu mar hore ayuu doortay. Sidaa darteed looma baahna in xal la raadiyo.
Taariikhda Adar 23, 03 - 2022/14/16 saacada XNUMX:XNUMX
Taas macneheedu waxa weeye in aanay jirin hayb u dhexeeya xalaal iyo akhlaaq  Kuwani waa laba qaybood oo mabda'a madax-bannaan (in kasta oo mar walba aanu jirin khilaaf u dhexeeya iyaga dabcan). In falku yahay mid akhlaaq ah iyo in kale, iyo in si xalaal ah loo xukumo in uu xalaal yahay iyo in uu xaaraan yahay waa laba xukun oo kala duwan oo ku dhow madax bannaan. Qaybta xalaasha iyo akhlaaqda waa laba qaybood oo kala duwan. Dabcan marka ay jiraan khilaaf u dhexeeya waxbaridda akhlaaqda iyo xalaalnimada markaas waa in si uun loo go'aansadaa (tanina mar walba maaha mid loo xaglinayo xalaalnimada), laakiin jiritaanka khilaafku laf ahaantiisu ma aha dhibaato. Waxaa jira isku dhacyo noocan oo kale ah oo u dhexeeya laba qiyam oo akhlaaqeed (sida tusaale ahaan badbaadinta nolosha adoo keenaya xanuunka), mana jirto wax diidmo ah in sidoo kale ay jiri doonto qiimo xalaal ah iyo qiyam akhlaaqeed.
Xigasho tiirka 15. iyo hadalkaaga ku saabsan khaniisyada wareysiga London. Miyaanay ahayn macalimiin aan mararka qaarkood ilaalinayn nidaamka diinta? Fadlan ma ii sharxi kartaa faraqa u dhexeeya?
Taariikhda Adar 23, 03 - 2022/14/43 saacada XNUMX:XNUMX
Tan waxaan kaga hadlay bilawga buugga saddexaad ee trilogy. Marka la soo koobo, marka khilaaf weyni dhaco sharciga mar walba wuu shaqeeyaa. Tusaale ahaan, reer Camaaleq. Tawreed lafteedu waxay xisaabta ku darsatay qiimaha akhlaaqda oo ay haddana amri jirtay. Laakin marka isku dhacu uu yahay mid shil ah, sida xakameynta maskaxda iyo Shabbat, waxaa jirta wax aan macquul aheyn in laga saaro amarka Shabbat ee ah inay diidayso Pikun ama lidkeeda. Xaaladahan oo kale waa inaad adigu go'aan ka gaartaa.
Oo waxaas oo dhan markay Tawreed ku caddahay amarku. Haddii ay tahay natiijada tafsiir ama wacdi markaas shakigu wuxuu galayaa halkan in xeerkani khaldan yahay.
Taariikhda Adar 23, 03 - 2022/14/27 saacada XNUMX:XNUMX
Waxaan ku sheegi jiray doodaha ku saabsan dabeecadaha iska soo horjeeda ee diinta Yuhuudda, in ra'yigaagu yahay in kiiskan akhlaaqda laga doorto Tawreed, oo ka soo horjeeda Rabbi Riskin oo okimata ku dhex jira Tawreedka, iyo rabbaaniyiin dhaqameed oo okimata ku sameeya akhlaaqda. Iyo caadadii reer binu Israa'iil Tawreed.
Kaliya, runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad fikradayda caddeyso. Xalaqa Daa’uud cad oo akhlaaqda ka hor imanaysa ma meel lagu dooran karaa? Oo ka waran Halacha Durban? Okimata miyaa laga dhigay Dauriyta halakhah si aan ka hor imanayn akhlaaqda, xataa ka soo horjeeda dhaqanka halaxaqa?
Taariikhda Adar 23, 03 - 2022/14/44 saacada XNUMX:XNUMX
waan caddeeyay. Dhanka Okimot dabcan waa suurtagal. Albaabada tarjumaada lama qufulin.
27 Adar 03, 2022 - 14/54/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Su'aal aan waxba galabsan. Xaqiiqda ah in ay jirto akhlaaq sax ah (tusaale ahaan rabbaaniga ah) - halkee laga diiwaan geliyay anshaxan? Ma caqligeena ayaynu ka soo qaadanaynaa in aan dil iyo tuugnimo la ogolaan? Taasi waa, haddii ay tahay wax laga bartay dareenka aadanaha ama heshiisyada bulsho ee soo jireenka ah, markaa ma sii ahaanayso in lagu qasbo qof aan aqbalin dareenkaas. Hadday si uun ula xidhiidho Tawreed, haddana waa sharci Rabbaani ah oo qoran, xaggee bayse ku kala duwan yihiin Tawreed iyo akhlaaqda?
27 Adar 03, 2022 - 15/30/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxay ku qoran tahay looxa qalbigayaga. Tawreed ayaa ina baraysa, adiguna waxaad samaysay wax wanaagsan oo wanaagsan, laakiin nama caddayn waxa loola jeedo. Waxay u malaynaysaa in qof kastaa fahmayo macnaha nidaamka akhlaaqda (waxa ay ku qoran tahay looxa qalbigiisa). Nuxurka akhlaaqda waxa laga bartaa akhlaaqda akhlaaqda, laakiin waajibka in la raaco waa nidaamka Eebbe. Sida aan ku sharaxay tiirka. Haddii uu jiro qof aan maskaxdan lahayn waa qof buka oo aan waxba ka jirin. Sida qof indho la'aan ah oo aan waxba arkin waxba kuma laha.
Farqiga u dhexeeya halakhah iyo akhlaaqda ayaa ku jira amarka. Awaamiirta Tawreed waxay ka hadlayaan Halacha oo keliya, akhlaaqduna kuma hoos jirto amarka. Waa rabitaan rabaani ah amar la'aan sidaas darteed waxay ku sii jirtaa meel ka baxsan sharciga. Sidaa darteed sidoo kale nuxurkeedu kuma jiro kitaabka Tawreed ee waa gudahayaga. Dhanka kale, Halacha waxa ku jira sidoo kale waxay ku qoran yihiin Tawreed. Sidaa darteed, "oo waxaad samaysay wax qumman oo wanaagsan" laguma darin tirada mitzvos ee mid ka mid ah dadweynaha.
27 Adar 03, 2022 - 15/37/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Taasi waa, waxaa jirta malo ah in "daacadii iyo wanaagu" ay tahay wax uu qof kasta oo bini'aadam ah ku fahmayo maskaxdiisa aasaasiga ah, taas oo ah, waxyaabaha aan u aqbalno dil iyo kufsi, laakiin isla su'aasha aad waydiisay cawaanta - maxaad ka odhan lahayd. calooshood u shaqeystayaal u haysta in shaqadiisu tahay dil. Waxa daliil u ah in uu jiro nidaam akhlaaq dibadeed oo aadamiga, Rabbaani ah, laakiin haddana, nidaamkani ma fasiro waxa ku jira “xaq iyo wanaag”, haddana waxaan ku weydiin doonnaa maxaad ka odhan lahayd calooshood u shaqeystayaal aaminsan in dilku yahay. xaqnimo iyo wanaag. Marka la soo koobo, waxaan jeclaan lahaa in aan xalliyo dhibaatada aad xallinayso adiga oo u malaynaya in akhlaaqdu u baahan tahay Ilaah.
27 Adar 03, 2022 - 16/19/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxaad isku daraa diyaarado. Su'aal ayaan weydiiyey ma ahayn qof aan fahmin in dilku xaaraan yahay balse qof fahmaya in uu xaaraan yahay balse aan dareensanayn in uu ka go'an yahay. Tani waa su'aal gebi ahaanba ka duwan. Kii wax garan waaya waa indhoole. Maxaan u sheegaa? Taas oo macnaheedu yahay indhoolaha aan arkin xaqiiqda oo diida jiritaanka midabada tusaale ahaan.
Waxa aan waydiiyey waa maxay waxa u ah isha ay ku saxan yihiin akhlaaqda ee ma aha waxa xeerarka akhlaaqdu sheegaan.
Illahay la'aanteed aniguba, dareemayey sharcinimada xeerarka akhlaaqda, maba xidheen iyaga. Waxa aan meesha ka saarayaa dareenkan in uu yahay dhalanteed aniga la igu fahmay in aanu sax ahayn. Illahay uun baa xaq siin kara.
27 Adar 03, 2022 - 16/25/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Waxaan gartay. Asal ahaan waxaad leedahay waxa ku jira akhlaaqda - waa la og yahay qof kasta oo bini aadam ah, waa wax inagu dhex jira in dilka iyo kufsigu ay yihiin akhlaaq darro. Waxaad sidoo kale asal ahaan ku doodaysaa in akhlaaqda asaasiga ah ay tahay inay noqoto mid la aqbali karo qof kasta, inkastoo isbeddelka dhaqamada iyo xilliyada. Farqiga u dhexeeya cawaanta iyo mu’minka ayaa ah in qofka mu’minka ah uu sidoo kale sharaxo sababta akhlaaqdaasi ay waajib ugu tahay. sax ayaan u fahmay?
27 Adar 03, 2022 - 16/26/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
dhab ahaan sidaas oo kale. Waxaan filayaa in aan tan ku sharraxay tiirka iyo doodda asalka ah labadaba.
27 Adar 03, 2022 - 16/33/XNUMX saacada XNUMX:XNUMX
Jonathan Shalom oo ku sugan Nachion Daaran Geeridii Marxuum Prof. David Halvani Weiss (Tiirka 485)
Yishai Daaran Ka jawaab su'aal ku saabsan daraasadaha